Knowledge Archives - Shwe Khit
ဆငျ၊ ဆငျထိနျး၊ ဘုရငျ၊ ဘုနျးကွီး အဲဒီသူတှေ ငရဲကတြော့မယျဆိုပါတော့ ဘယျသူက ငရဲအိုးထဲမှာ အောကျဆုံးကနေ အပွငျးဆုံးအပူဒဏျကို ခံရမယျထငျသလဲ”
ဟိုးရှေးရှေးက မငျးဆရာတျောတဈပါးဟာ အလှနျသိက်ခာ ပညာကွီးမားစှာနဲ့ နထေိုငျတျောမူတယျ။ သူနတေဲ့ ကြောငျးဝငျးထဲမှာလညျးအမွတျတနိုးနဲ့ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျထားတဲ့ ဗောဓိပငျကွီးတဈပငျရှိတယျ။တဈနတေ့ော့ ဆရာတျောကွီးက ဗဓေိပငျအောကျမှာ တံမွကျစညျးလှညျးနတေုနျး ဘုရငျက ဆငျနဲ့ ကွှလာပွီး ဆရာတျောကွီးကို ဝငျဖူးတယျ။ဆရာတျောကွီးက ဗောဓိပငျနဲ့ အနီးမဝေးက ကှပျပဈြပျေါမှာထိုငျပွီး ဘုရငျကွီးနဲ့ စကားပွောဆိုနပေါတယျ။အဲဒီအခြိနျမှာ ဘုရငျစီးလာတဲ့ ဆငျက ဗောဓိပငျက ညောငျရှကျကို နှာမောငျးနဲ့ လှမျးဆှဲဖို့ လုပျတယျ။ ဆငျက ဆငျလိမ်မာပါ။“ငါညောငျရှကျကို လှမျးဆှဲလို့ သငျ့ပါ့မလားပေါ့” ဒါပမေဲ့ ဆငျက ဘယျလို စဉျးစားပွနျသလဲဆိုတော့ ငါညောငျရှကျကို လှမျးဆှဲတာ မသငျ့ဘူးဆိုရငျ
ငါ့ဆငျထိနျးက တားမွဈမှာပေါ့။ နှာမောငျးနဲ့ စမျးကွညျ့မယျဆိုပွီး ညောငျရှကျတှကေို ထိလိုကျတယျ။ဆငျထိနျးကလညျး စဉျးစားတယျ။ ဘုရငျ့ဆငျကတော့ မဟုတျတာ လုပျနပွေီ။ ငါငေါကျလိုကျရငျ ဘုရငျ ကွိုကျပါ့မလားပေါ့။အေးလေ ဘုရငျကွီးကရှမှေ့ာ မွငျနရေတာပဲ။ အတျောဘူးဆိုရငျ ဘုရငျကပွောမှာပေါ့လို့ စဉျးစားလိုကျတယျ။ရှငျဘုရငျကလညျး ဆငျက ညောငျရှကျကို လှမျးယူနတော မွငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ မပွောဘူး။ ဘုရငျက ဘယျလို တှေးသလဲဆိုတော့ညောငျပငျရဲ့ ပိုငျရှငျက ဆရာတျောပဲ။ မစားအပျဘူးဆိုရငျ ဆရာတျော တားမှာပေါ့လို့ တှေးတယျ။ဆရာတျောကလညျး ဆငျက နှာမောငျးနဲ့ လှမျးဆှဲနတောမွငျတယျ။ ဗောဓိပငျဆိုတာ ဘုရားကိုယျစားစိုကျ ထားတာ။
မဖကျြဆီးကောငျးဘူး။ ဖကျြဆီးရငျ အဝီစိငရဲကတြတျတယျဆိုတာသိတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘုရငျ့ဆငျ ဖွဈနတေော့ မတားဘူး။ မပွောဘူး။နောကျဆုံးတော့ ဆငျက စားလို့ရတယျထငျပွီးတော့ ညောငျပငျကအရှကျတှကေို ခူးစားရော။“ကဲ … ဒကာကွီး … ဆငျ၊ ဆငျထိနျး၊ ဘုရငျ၊ဘုနျးကွီး အဲဒီသူတှေ ငရဲကတြော့မယျဆိုပါတော့ ဘယျသူကငရဲအိုးထဲမှာ အောကျဆုံးကနေ အပွငျးဆုံးအပူဒဏျကို ခံရမယျထငျသလဲ”“ဆငျကစားတာဆိုတော့ ဆငျပေါ့ဘုရား”“မဟုတျဘူးဒကာကွီး … ငရဲအိုးထဲကို အဲဒီလေးဦးကတြဲ့အခါ … အောကျဆုံးက ဘုနျးကွီး ဒယျအိုးဖငျမှာ ကပျနတော ဘုနျးကွီးပါဒကာ။ဘုနျးကွီးအထကျမှာ ဘုရငျ၊ ဘုရငျအထကျမှာ ဆငျထိနျး၊ ဆငျထိနျးအထကျကမှ ဆငျရှိနပေါတယျ။
အောကျဆုံးက ဘုနျးကွီးက အပူအပွငျးဆုံး ခံရပါတယျ”“ဘာကွောငျ့လဲဘုရား … တပညျ့တျော မရှငျးလို့ပါ”“ဒကာကွီး … ဦးဇငျးပွောခငျြတာက တာဝနျအရှိဆုံးသူက ပွောသငျ့ပွောထိုကျတာကို မပွောရငျ အမှားတှကေ ဆငျ့ကဲ ဆငျ့ကဲ ဖွဈကုနျတော့မှာပဲ။ဆငျက နှာမောငျးနဲ့ လှမျးနကေတညျးက ဘုရငျကို တဈခှနျးတညျးပွော လိုကျရငျ ပွီးနိုငျပါလကျြ … ဘုရငျဆိုပွီးဆငျခွငျအားနာနတေော့ ဒုက်ခအားလုံးရောကျကုနျတော့တာပေါ့။ မှနျမှနျ ကနျကနျ လမျးပွပေးရမယျ့သူတှကေမပွောဘဲ နှုတျပိတျနရေငျ လောကကွီးမှာ ကိုယျကြိုးနညျးပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျတိုငျတဈဦးတညျး ကိုယျကြိုးနညျးတာ ကိစ်စမရှိဘူး …အဖျောအပေါငျးတှေ တဈသီကွီး ချေါသှားမိမှာကို ဆငျခွငျသငျ့တာပေါ့ … ဒကာကွီး … ” ဦးဇငျးကြောငျးပျေါတကျတော့မယျ။စာအုပျလာပေးတာ … ကြေးဇူး တငျတယျ”“သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား”
ဟိုးရှေးရှေးက မင်းဆရာတော်တစ်ပါးဟာ အလွန်သိက္ခာ ပညာကြီးမားစွာနဲ့ နေထိုင်တော်မူတယ်။ သူနေတဲ့ ကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်းအမြတ်တနိုးနဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဗောဓိပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်နေ့တော့ ဆရာတော်ကြီးက ဗေဓိပင်အောက်မှာ တံမြက်စည်းလှည်းနေတုန်း ဘုရင်က ဆင်နဲ့ ကြွလာပြီး ဆရာတော်ကြီးကို ဝင်ဖူးတယ်။ဆရာတော်ကြီးက ဗောဓိပင်နဲ့ အနီးမဝေးက ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ဘုရင်ကြီးနဲ့ စကားပြောဆိုနေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ဘုရင်စီးလာတဲ့ ဆင်က ဗောဓိပင်က ညောင်ရွက်ကို နှာမောင်းနဲ့ လှမ်းဆွဲဖို့ လုပ်တယ်။ ဆင်က ဆင်လိမ္မာပါ။“ငါညောင်ရွက်ကို လှမ်းဆွဲလို့ သင့်ပါ့မလားပေါ့” ဒါပေမဲ့ ဆင်က ဘယ်လို စဉ်းစားပြန်သလဲဆိုတော့ ငါညောင်ရွက်ကို လှမ်းဆွဲတာ မသင့်ဘူးဆိုရင်
ငါ့ဆင်ထိန်းက တားမြစ်မှာပေါ့။ နှာမောင်းနဲ့ စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး ညောင်ရွက်တွေကို ထိလိုက်တယ်။ဆင်ထိန်းကလည်း စဉ်းစားတယ်။ ဘုရင့်ဆင်ကတော့ မဟုတ်တာ လုပ်နေပြီ။ ငါငေါက်လိုက်ရင် ဘုရင် ကြိုက်ပါ့မလားပေါ့။အေးလေ ဘုရင်ကြီးကရှေ့မှာ မြင်နေရတာပဲ။ အတော်ဘူးဆိုရင် ဘုရင်ကပြောမှာပေါ့လို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ရှင်ဘုရင်ကလည်း ဆင်က ညောင်ရွက်ကို လှမ်းယူနေတာ မြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြောဘူး။ ဘုရင်က ဘယ်လို တွေးသလဲဆိုတော့ညောင်ပင်ရဲ့ ပိုင်ရှင်က ဆရာတော်ပဲ။ မစားအပ်ဘူးဆိုရင် ဆရာတော် တားမှာပေါ့လို့ တွေးတယ်။ဆရာတော်ကလည်း ဆင်က နှာမောင်းနဲ့ လှမ်းဆွဲနေတာမြင်တယ်။ ဗောဓိပင်ဆိုတာ ဘုရားကိုယ်စားစိုက် ထားတာ။
မဖျက်ဆီးကောင်းဘူး။ ဖျက်ဆီးရင် အဝီစိငရဲကျတတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရင့်ဆင် ဖြစ်နေတော့ မတားဘူး။ မပြောဘူး။နောက်ဆုံးတော့ ဆင်က စားလို့ရတယ်ထင်ပြီးတော့ ညောင်ပင်ကအရွက်တွေကို ခူးစားရော။“ကဲ … ဒကာကြီး … ဆင်၊ ဆင်ထိန်း၊ ဘုရင်၊ဘုန်းကြီး အဲဒီသူတွေ ငရဲကျတော့မယ်ဆိုပါတော့ ဘယ်သူကငရဲအိုးထဲမှာ အောက်ဆုံးကနေ အပြင်းဆုံးအပူဒဏ်ကို ခံရမယ်ထင်သလဲ”“ဆင်ကစားတာဆိုတော့ ဆင်ပေါ့ဘုရား”“မဟုတ်ဘူးဒကာကြီး … ငရဲအိုးထဲကို အဲဒီလေးဦးကျတဲ့အခါ … အောက်ဆုံးက ဘုန်းကြီး ဒယ်အိုးဖင်မှာ ကပ်နေတာ ဘုန်းကြီးပါဒကာ။ဘုန်းကြီးအထက်မှာ ဘုရင်၊ ဘုရင်အထက်မှာ ဆင်ထိန်း၊ ဆင်ထိန်းအထက်ကမှ ဆင်ရှိနေပါတယ်။
အောက်ဆုံးက ဘုန်းကြီးက အပူအပြင်းဆုံး ခံရပါတယ်”“ဘာကြောင့်လဲဘုရား … တပည့်တော် မရှင်းလို့ပါ”“ဒကာကြီး … ဦးဇင်းပြောချင်တာက တာဝန်အရှိဆုံးသူက ပြောသင့်ပြောထိုက်တာကို မပြောရင် အမှားတွေက ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ။ဆင်က နှာမောင်းနဲ့ လှမ်းနေကတည်းက ဘုရင်ကို တစ်ခွန်းတည်းပြော လိုက်ရင် ပြီးနိုင်ပါလျက် … ဘုရင်ဆိုပြီးဆင်ခြင်အားနာနေတော့ ဒုက္ခအားလုံးရောက်ကုန်တော့တာပေါ့။ မှန်မှန် ကန်ကန် လမ်းပြပေးရမယ့်သူတွေကမပြောဘဲ နှုတ်ပိတ်နေရင် လောကကြီးမှာ ကိုယ်ကျိုးနည်းပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်တစ်ဦးတည်း ကိုယ်ကျိုးနည်းတာ ကိစ္စမရှိဘူး …အဖော်အပေါင်းတွေ တစ်သီကြီး ခေါ်သွားမိမှာကို ဆင်ခြင်သင့်တာပေါ့ … ဒကာကြီး … ” ဦးဇင်းကျောင်းပေါ်တက်တော့မယ်။စာအုပ်လာပေးတာ … ကျေးဇူး တင်တယ်”“သာဓု … သာဓု … သာဓုပါဘုရား”
မွနျမာနိုငျငံတှငျ တဈဆူတညျးသာရှိသညျ့ သမိုငျး ဝငျ “လေးဆူဓာတျတျော ကိုယျတျော ပြောကျဘုရား
မွနျမာနိုငျငံတှငျ တဈဆူတညျးသာရှိသညျ့ သမိုငျးဝငျ “လေးဆူဓာတျတျော ကိုယျတျော ပြောကျဘုရား” နှငျ့ ဂေါတမဘုရား၏ “လကျတျောရာ” မွတျကိုစဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး မုံရှာခရိုငျ ခြောငျးဦးမွို့နယျ ခြောငျးဦး- အမွငျ့သှားကားလမျး၏ လကျဝဲဘကျ ခြောငျးဦးမွို့နှငျ့ ငါးမိုငျအကှာ မုံရှာမွို့နှငျ့ ၁၅ မိုငျအကှာ တောကြောငျးလေးကြေးရှာအုပျစုတှငျ တညျရှိသညျ။မွနျမာနိုငျငံဒသေအနှံ့ခွတေျောရာထုလုပျကိုးကှယျမှု အလှနျမြားပွားစှာ ဖူးတှရေ့သျောလညျး လကျတျောရာဘုရားကိုမူ တဈနိုငျငံလုံးတှငျ ခြောငျးဦးမွို့နယျတှငျသာ ဖူးတှရေ့မညျဖွဈသညျ။လကျတျောရာဘုရားသမိုငျးအရ ကကုသနျဘုရားရှငျ၏ ညှပျရိုးတျော၊ ကောဏဂုံဘုရားရှငျ၏ ရငျအုပျတျော၊ကဿပဘုရားရှငျ၏နဖူးတျောနှငျ့ လညျခြောငျးတျောတို့ ဌာပနာထားရှိကွောငျး ဖျောပွသညျ။
“ဂေါတမဘုရား သကျတျောထငျရှားရှိတုနျးက ဒသေစာရီကွှစဉျ တနျ့ကွညျ့တောငျမှာ ရပျတျောမူပွီး သာသနာတျောထှနျးကားပွနျ့ပှားမယျ့မွောကျစူးစူးကို လကျညိုးညှနျပွီး ရှေးနောငျတျောဘုရားသုံးဆူရဲ့ သရီရဓာတျတှေ ကိနျးအောငျးဖူးမွျောဖို့ ဆန်ဒပွုတဲ့အခါ ပစ်စကေဗုဒ်ဓ အလောငျးတျောဓနုသီဟမငျးကွီးတညျထားတဲ့ ကိုယျတျောပြောကျစတေီတညျတဲ့ နရောအရောကျမှာသိကွား မငျးကဘုရားရှငျရဲ့ ဆန်ဒပွညျ့စဖေို့ မွနှေဈလှာခှဲပွီး ဖနျဆငျးစေ ရာမှာ နောငျတျောဘုရားသုံးဆူတို့ရဲ့ သရီရဓာတျတျောတှကေို ဖူးတှရေ့ပွီး လကျယာရဈ ခုနဈပတျလှညျ့ပွီး ဖူးမွျောခဲ့တယျလို့ သမိုငျးမှာတှရေ့ပါတယျ။
အဲဒီနောကျ မန်တလာဂီရိတောငျကို ကွှမယျအလုပျမှာ ကိုးသောငျးလောကျရှိတဲ့ ဘီလူး တှထေဲက ငါးသောငျးလောကျရှိတဲ့ ဘီလူးတှထှေကျပွေးကွလို့ ကနျြတဲ့ဘီလူး လေးသောငျးက ဘုရားကို လာဦးခိုကျကွပါတယျ။ အဲဒါကို အရှငျအာနန်ဒာကမေးရာမှာ မွတျစှာဘုရားရှငျက တလငျးသာယာ အင်ျဂါခုနဈပါးနဲ့ပွညျ့စုံတဲ့မွနေရောကို လကျယာလကျတျောနဲ့သုံးသပျရာက လကျတျောရာဖွဈပျေါလာခဲ့တာလို့ သမိုငျးမှာပွဆိုထားပါတယျ” ဟု လကျတျောရာဘုရား ဂေါပကအဖှဲ့ဝငျတဈဦးက သမိုငျးကို ကိုးကားပွောပွသညျ။
အဆကျဆကျ ထိနျးသိမျးစောငျ့ ရှောကျလာသော ကိုယျတျောပြောကျဘုရားနှငျ့ လကျတျောရာဘုရားကွီး၏ ဂန်ဓကုဋိတိုကျတျောကို ၁၃၅၈ ခုနှဈက ဆောကျလုပျခဲ့ပွီး ၁၃၇၅ ခုနှဈတှငျ အသဈ တဈဖနျ ပွနျလညျမှမျးမံထားရာ ဘုံပွာသာဒျရှထေီးတျောတို့ဖွငျ့ ခမျးနား ထညျဝါလှသညျကို တှရေ့သညျ။ ကိုယျတျောပြောကျဘုရားနှငျ့ လကျတျောရာဘုရားတို့၏ ဝိသသေထူးခွားခကျြ ၂၇ ခကျြကို သမိုငျးအကဉျြးစာအုပျတှငျ ဖျောပွထားရာ၌ မွနျမာနိုငျငံတှငျ တဈဆူတညျးသာ ပျေါပေါကျခွငျး၊ ဂေါတမဘုရားရှငျကိုယျတျောတိုငျကွှခြီပူဇျောခဲ့ခွငျး၊ ကကုသနျဘုရား ညှပျရိုးတျော၊ ကောဏဂုံဘုရားရငျအုပျတျော၊ ကဿပဘုရား၏ နဖူးတျော၊ လညျခြောငျးတျောနှငျ့ ဂေါတမဘုရားလကျယာလကျရုံးတျောမြားဌာပနာပူဇျောထားသညျ့ ဓာတုစတေီမွတျဖွဈခွငျး စသညျတို့ပါဝငျသညျ။
တောကြောငျးလေးရှာအား ရှေးဘုရငျလကျထကျတျောက လကျ ရာတျောဘုရားကို အမှီ ပွုကာ လကျတျောရာရှာဟုချေါဆိုခဲ့ကွပွီးးအမွငျ့မွို့အနီး ခငျြး တှငျးမွဈအတှငျး တျောသလငျးလ လှပွေိုငျပှဲကငျြးပရာတှငျ လကျတျောရာ ရှာအပါအဝငျ ၁၅ ရှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွောငျး မှတျတမျးမြားတှငျ ဖျောပွသညျ။ လကျတျောရာကြောငျးတိုကျ အနောကျဘကျလမျးမကွီးသညျ ယခငျက ကကုသနျဘုရား အလောငျးတျောရှဟေင်ျသာမငျးဖွဈတျောမူရာ၊ ကဿပဘုရား အလောငျးတျော ငါးရံ့မငျးဖွဈတျောမူရာ
အငျးကွီးရှိခဲ့သျော လညျး လကျရှိအခြိနျတှငျ အငျးမှာကောသှားပွီး လမျးမကွီး ဖွဈနပွေီဖွဈသညျ။တောကြောငျးလေးရှာဟု အမညျတှငျ လာရခွငျးမှာ အမွငျ့မွို့ဟောငျးအရှဘေ့ကျတှငျ ရှငျအရဟံမထရျေနှငျ့ သံဃာတျောမြား တောရကြောငျး ဆောကျတညျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ တောရကြောငျးရှာဟု ချေါတှငျခဲ့သညျ။သမိုငျးဝငျထငျရှားလကျတျောရာဘုရား ဗုဒ်ဓပူဇနိယပှဲတျောကိုနှဈစဉျ ဝါဆိုလဆနျး ၁၄ ရကျတှငျ ကငျြးပရာ ရပျနီးရပျဝေးမှဘုရားဖူးမြားအနဖွေငျ့ သှားလမျးသာ၍ လာလမျး ကောငျး သော အညာပုဂံဟုသမိုငျးတှငျ ချေါသော ခြောငျးဦးဒသေသို့အရောကျလှမျးကာ ဘုရားဖူးကု သိုလျနှငျ့အတူ ဗဟုသုတကိုပါ ရယူနိုငျရနျ လာရောကျနိုငျပါကွောငျး ဖိတျချေါ လိုကျရပါ၏။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ဆူတည်းသာရှိသည့် သမိုင်းဝင် “လေးဆူဓာတ်တော် ကိုယ်တော် ပျောက်ဘုရား” နှင့် ဂေါတမဘုရား၏ “လက်တော်ရာ” မြတ်ကိုစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာခရိုင် ချောင်းဦးမြို့နယ် ချောင်းဦး- အမြင့်သွားကားလမ်း၏ လက်ဝဲဘက် ချောင်းဦးမြို့နှင့် ငါးမိုင်အကွာ မုံရွာမြို့နှင့် ၁၅ မိုင်အကွာ တောကျောင်းလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိသည်။မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့ခြေတော်ရာထုလုပ်ကိုးကွယ်မှု အလွန်များပြားစွာ ဖူးတွေ့ရသော်လည်း လက်တော်ရာဘုရားကိုမူ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ချောင်းဦးမြို့နယ်တွင်သာ ဖူးတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။လက်တော်ရာဘုရားသမိုင်းအရ ကကုသန်ဘုရားရှင်၏ ညှပ်ရိုးတော်၊ ကောဏဂုံဘုရားရှင်၏ ရင်အုပ်တော်၊ကဿပဘုရားရှင်၏နဖူးတော်နှင့် လည်ချောင်းတော်တို့ ဌာပနာထားရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။
“ဂေါတမဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိတုန်းက ဒေသစာရီကြွစဉ် တန့်ကြည့်တောင်မှာ ရပ်တော်မူပြီး သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားမယ့်မြောက်စူးစူးကို လက်ညိုးညွှန်ပြီး ရှေးနောင်တော်ဘုရားသုံးဆူရဲ့ သရီရဓာတ်တွေ ကိန်းအောင်းဖူးမြော်ဖို့ ဆန္ဒပြုတဲ့အခါ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ အလောင်းတော်ဓနုသီဟမင်းကြီးတည်ထားတဲ့ ကိုယ်တော်ပျောက်စေတီတည်တဲ့ နေရာအရောက်မှာသိကြား မင်းကဘုရားရှင်ရဲ့ ဆန္ဒပြည့်စေဖို့ မြေနှစ်လွှာခွဲပြီး ဖန်ဆင်းစေ ရာမှာ နောင်တော်ဘုရားသုံးဆူတို့ရဲ့ သရီရဓာတ်တော်တွေကို ဖူးတွေ့ရပြီး လက်ယာရစ် ခုနစ်ပတ်လှည့်ပြီး ဖူးမြော်ခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက် မန္တလာဂီရိတောင်ကို ကြွမယ်အလုပ်မှာ ကိုးသောင်းလောက်ရှိတဲ့ ဘီလူး တွေထဲက ငါးသောင်းလောက်ရှိတဲ့ ဘီလူးတွေထွက်ပြေးကြလို့ ကျန်တဲ့ဘီလူး လေးသောင်းက ဘုရားကို လာဦးခိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒါကို အရှင်အာနန္ဒာကမေးရာမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်က တလင်းသာယာ အင်္ဂါခုနစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြေနေရာကို လက်ယာလက်တော်နဲ့သုံးသပ်ရာက လက်တော်ရာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလို့ သမိုင်းမှာပြဆိုထားပါတယ်” ဟု လက်တော်ရာဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက သမိုင်းကို ကိုးကားပြောပြသည်။
အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်လာသော ကိုယ်တော်ပျောက်ဘုရားနှင့် လက်တော်ရာဘုရားကြီး၏ ဂန္ဓကုဋိတိုက်တော်ကို ၁၃၅၈ ခုနှစ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၃၇၅ ခုနှစ်တွင် အသစ် တစ်ဖန် ပြန်လည်မွမ်းမံထားရာ ဘုံပြာသာဒ်ရွှေထီးတော်တို့ဖြင့် ခမ်းနား ထည်ဝါလှသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကိုယ်တော်ပျောက်ဘုရားနှင့် လက်တော်ရာဘုရားတို့၏ ဝိသေသထူးခြားချက် ၂၇ ချက်ကို သမိုင်းအကျဉ်းစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ဆူတည်းသာ ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကြွချီပူဇော်ခဲ့ခြင်း၊ ကကုသန်ဘုရား ညှပ်ရိုးတော်၊ ကောဏဂုံဘုရားရင်အုပ်တော်၊ ကဿပဘုရား၏ နဖူးတော်၊ လည်ချောင်းတော်နှင့် ဂေါတမဘုရားလက်ယာလက်ရုံးတော်များဌာပနာပူဇော်ထားသည့် ဓာတုစေတီမြတ်ဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။
တောကျောင်းလေးရွာအား ရှေးဘုရင်လက်ထက်တော်က လက် ရာတော်ဘုရားကို အမှီ ပြုကာ လက်တော်ရာရွာဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီးးအမြင့်မြို့အနီး ချင်း တွင်းမြစ်အတွင်း တော်သလင်းလ လှေပြိုင်ပွဲကျင်းပရာတွင် လက်တော်ရာ ရွာအပါအဝင် ၁၅ ရွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြသည်။ လက်တော်ရာကျောင်းတိုက် အနောက်ဘက်လမ်းမကြီးသည် ယခင်က ကကုသန်ဘုရား အလောင်းတော်ရွှေဟင်္သာမင်းဖြစ်တော်မူရာ၊ ကဿပဘုရား အလောင်းတော် ငါးရံ့မင်းဖြစ်တော်မူရာ
အင်းကြီးရှိခဲ့သော် လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် အင်းမှာကောသွားပြီး လမ်းမကြီး ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။တောကျောင်းလေးရွာဟု အမည်တွင် လာရခြင်းမှာ အမြင့်မြို့ဟောင်းအရှေ့ဘက်တွင် ရှင်အရဟံမထေရ်နှင့် သံဃာတော်များ တောရကျောင်း ဆောက်တည်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တောရကျောင်းရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။သမိုင်းဝင်ထင်ရှားလက်တော်ရာဘုရား ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ် ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်တွင် ကျင်းပရာ ရပ်နီးရပ်ဝေးမှဘုရားဖူးများအနေဖြင့် သွားလမ်းသာ၍ လာလမ်း ကောင်း သော အညာပုဂံဟုသမိုင်းတွင် ခေါ်သော ချောင်းဦးဒေသသို့အရောက်လှမ်းကာ ဘုရားဖူးကု သိုလ်နှင့်အတူ ဗဟုသုတကိုပါ ရယူနိုင်ရန် လာရောက်နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ် လိုက်ရပါ၏။
လောက၌ကွိုတငျ၍ မသိနိုငျသောအရာ (၅)မြိုးရှိတယျ။ ဘာတှလေဲဆိုရငျ….
(၁)ဇီဝိတံ။ အသကျရှငျလကျြ ဘယျလောကျနရေဦးမယျဆိုတာ မသိဘူး။ လောကကွီးမှာ ဘယျလောကျကွာကွာ အသကျရှငျနထေိုငျရဦးမလဲ ဆိုတာကိုမသိနိုငျဘူးတဲ့။
(၂)ဗြာဓိ။ ဘဝခရီးကို လြှကျေလှမျးရတဲ့အခါမှာ ဘာရောဂါနဲ့ သမေယျဆိုတာကိုလညျး မသိနိုငျပါဘူးတဲ့။
(၃)ကာလော။ ကာလဆိုတာလူတဈယောကျဟာ ဘဝခရီး အဆုံးသတျမယျ့အခြိနျဟာဘယျအခြိနျလဲ။ မနကျလား၊ နလေ့ညျလား၊ ညလားပွောလို့ မရဘူးတဲ့။
ပွောလို့မရလို့လဲပဲ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ ဘဝနိဂုံး ခြုပျသှားကွတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ အမြားကွီး ရှိကွပါတယျ။
အမှတျတမဲ့နရေငျတော့ မသိဘူးပေါ့ အမှတျနဲ့ နမေယျဆိုရငျတော့ အကုနျသိနမှောပဲ မမြှျောလငျ့ဘဲနဲ့ ဖွဈနကွေတာတှခေညျြးပါပဲ။
(၄)ဒဟေနိက်ခပေနံ။ ကိုယျ့ရဲ့ရုပျအလောငျးကို ဘယျနရောမှာ သဂွိုလျမယျ၊ ဘယျနရောမှာ မွှုပျနှံမယျဆိုတာကိုလညျး မသိနိုငျဘူး။
တခြို့ဟာ ကောငျးကငျယံမှာ အနိစ်စ ရောကျသှားတာလညျးရှိတယျ။ တခြို့ဟာ ပငျလယျထဲ ခရီးသှားရငျး အနိစ်စရောကျသှားတာလညျးရှိတယျ။ အမြိုးမြိုး ရှိကွတယျလေ။
အဲဒီတော့ ကိုယျ့ရဲ့အလောငျးကို ဘယျနရောမှာ မွှုပျနှံမယျ၊ ဘယျနရောမှာ သဂွိုလျမလဲဆိုတာကိုလညျး မသိနိုငျပါဘူးတဲ့။ နောကျမသိနိုငျတာ တဈခုက ဘာလဲဆိုရငျ…
(၅)ဂတိ။ လူတိုငျးလူတိုငျးဟာ ဘဝလမျးကွောငျးကွီး (၅)ခုရှိတယျ။ ဂတိငါးပါးလို့ ချေါတာပေါ့။ Destination ခရီးလမျးဆုံ ငါးဌာနရှိတယျ။
အဲဒီငါးဌာနက ဘာတှလေညျးဆိုလို့ရှိရငျ ၁။နတျပွညျ ကုသိုလျကံတှေ အကြိုးပေးလို့ ရောကျသှားနိုငျတဲ့ နတျပွညျပေါ့နျော။ နောကျတဈခုက ၂။လူ့ပွညျပဲ။ အကုသိုလျကံတှေ အကြိုးပေးလို့ ရောကျသှားနိုငျတာက ၃။ပွိတ်တာ ၄။တိရစ်ဆာနျ ၅။ငရဲ အားလုံး ငါးမြိုးရှိတယျ။
အဲဒီတော့ ပုထုဇဉျတဈယောကျအနနေဲ့ ဘဝနိဂုံး အဆုံးသတျ သှားပွီးတဲ့အခါမှာ ဘယျဘဝမှာ ပွနျလညျမှေးဖှားမလဲဆိုတာ ပွောလို့မရဘူးတဲ့။
သဆေုံးတဲ့အခွိနမြှာ ဖှဈပေါလြာတဲ့ အခှအနေတှပေေေါမြှာ မူတညသြှားတယတြဲ့။ သောတာပနြ မဖှဈသေးသမွှ “နိယတဂတိ”ကိုယြ သတမြှတထြားတဲ့ နရော တဈခုကို သှားလို့မရသေးဘူးတဲ့။
ဘုရားအလောငျးကွီးတောငျမှ တိရစ်ဆာနျဖွဈတဲ့အခါဖွဈတယျ။ ငရဲကတြဲ့အခါ ကသြှားတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သခေါနီးအခြိနျမှာ ဘာတှနေဲ့ကွုံပွီးဘာစိတျနဲ့ သမေယျဆိုတာကိုပွောလို့ မရလို့ပေါ့နျော။
ဘဝခရီးကို လြှောကျလှမျးပွီဆိုရငျ လူတိုငျးဟာ ဒီအခကျြကို ကွိုတငျမပွောနိုငျကွပါဘူးတဲ့။
အဲဒီတော့ ဘဝဆညျးဆာ ရောကျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတိုငျး ပုဂ်ဂိုလျတိုငျးကို ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ အဲဒီအခြိနျမှာ အလှနျသနားစရာ ကောငျးပါတယျ။
သအေံ့မူးမူးအခြိနျ ရောကျနပွေီဆိုရငျ ပတျဝနျးကငျြကလညျး ကိုယျ့ကိုကယျတငျ မပေးနိုငျတော့ဘူး။ မွတျစှာဘုရားက ဟောထားတယျ “န သနျတိ ပုတျတာ တာဏာယ”တဲ့ “လောကမှာ သခွေငျးတရားနဲ့ ရငျဆိုငျရပွီဆိုရငျ အကာအကှယျပေးနိုငျတဲ့ သားသမီးဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ မိဘတှေ အဖို့နျော”
သားသမီးတှအေတှကျလညျးပဲ ကယျတငျပေးနိုငျတဲ့ မိဘဆိုတာ မရှိဘူးနျော။ ဆှတှေမြေိုးတှထေဲမှာလညျး ဒီလိုဘဝဆညျးဆာအခြိနျ ရောကျနပွေီဆိုရငျတော့ကယျတငျပေးနိုငျတဲ့သူ တဈယောကျမှ မရှိဘူး ဒီလိုပွောတာ။
အဂ်ဂမဟာပဏ်ဍိတ ဒေါကျတာအရှငျနန်ဒမာလာဘိဝံသ (ပါမောက်ခခြုပျဆရာတျောကွီး)
(၁)ဇီဝိတံ။ အသကျရှငျလကျြ ဘယျလောကျနရေဦးမယျဆိုတာ မသိဘူး။ လောကကွီးမှာ ဘယျလောကျကွာကွာ အသကျရှငျနထေိုငျရဦးမလဲ ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့။
သဆေုံးတဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အခွအေနတှေပေျေါမှာ မူတညျသှားတယျတဲ့။ သောတာပနျ မဖွဈသေးသမြှ “နိယတဂတိ”ကိုယျ သတျမှတျထားတဲ့ နရော တဈခုကို သှားလို့မရသေးဘူးတဲ့။
လောက၌ကြိုတင်၍ မသိနိုင်သောအရာ (၅)မျိုးရှိတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုရင်….
(၁)ဇီဝိတံ။ အသက်ရှင်လျက် ဘယ်လောက်နေရဦးမယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ လောကကြီးမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရဦးမလဲ ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့။
(၂)ဗျာဓိ။ ဘဝခရီးကို လျှေက်လှမ်းရတဲ့အခါမှာ ဘာရောဂါနဲ့ သေမယ်ဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။
(၃)ကာလော။ ကာလဆိုတာလူတစ်ယောက်ဟာ ဘဝခရီး အဆုံးသတ်မယ့်အချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲ။ မနက်လား၊ နေ့လည်လား၊ ညလားပြောလို့ မရဘူးတဲ့။
ပြောလို့မရလို့လဲပဲ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဘဝနိဂုံး ချုပ်သွားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီး ရှိကြပါတယ်။
အမှတ်တမဲ့နေရင်တော့ မသိဘူးပေါ့ အမှတ်နဲ့ နေမယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်သိနေမှာပဲ မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ ဖြစ်နေကြတာတွေချည်းပါပဲ။
(၄)ဒေဟနိက္ခေပနံ။ ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို ဘယ်နေရာမှာ သဂြိုလ်မယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ မြှုပ်နှံမယ်ဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်ဘူး။
တချို့ဟာ ကောင်းကင်ယံမှာ အနိစ္စ ရောက်သွားတာလည်းရှိတယ်။ တချို့ဟာ ပင်လယ်ထဲ ခရီးသွားရင်း အနိစ္စရောက်သွားတာလည်းရှိတယ်။ အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်လေ။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလောင်းကို ဘယ်နေရာမှာ မြှုပ်နှံမယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ သဂြိုလ်မလဲဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ နောက်မသိနိုင်တာ တစ်ခုက ဘာလဲဆိုရင်…
(၅)ဂတိ။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ဘဝလမ်းကြောင်းကြီး (၅)ခုရှိတယ်။ ဂတိငါးပါးလို့ ခေါ်တာပေါ့။ Destination ခရီးလမ်းဆုံ ငါးဌာနရှိတယ်။
အဲဒီငါးဌာနက ဘာတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင် ၁။နတ်ပြည် ကုသိုလ်ကံတွေ အကျိုးပေးလို့ ရောက်သွားနိုင်တဲ့ နတ်ပြည်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက ၂။လူ့ပြည်ပဲ။ အကုသိုလ်ကံတွေ အကျိုးပေးလို့ ရောက်သွားနိုင်တာက ၃။ပြိတ္တာ ၄။တိရစ္ဆာန် ၅။ငရဲ အားလုံး ငါးမျိုးရှိတယ်။
အဲဒီတော့ ပုထုဇဉ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝနိဂုံး အဆုံးသတ် သွားပြီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်ဘဝမှာ ပြန်လည်မွေးဖွားမလဲဆိုတာ ပြောလို့မရဘူးတဲ့။
ဘုရားအလောင်းကြီးတောင်မှ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်။ ငရဲကျတဲ့အခါ ကျသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သေခါနီးအချိန်မှာ ဘာတွေနဲ့ကြုံပြီးဘာစိတ်နဲ့ သေမယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ မရလို့ပေါ့နော်။
ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းပြီဆိုရင် လူတိုင်းဟာ ဒီအချက်ကို ကြိုတင်မပြောနိုင်ကြပါဘူးတဲ့။
အဲဒီတော့ ဘဝဆည်းဆာ ရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီအချိန်မှာ အလွန်သနားစရာ ကောင်းပါတယ်။
သေအံ့မူးမူးအချိန် ရောက်နေပြီဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကိုယ့်ကိုကယ်တင် မပေးနိုင်တော့ဘူး။ မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားတယ် “န သန်တိ ပုတ်တာ တာဏာယ”တဲ့ “လောကမှာ သေခြင်းတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ သားသမီးဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ မိဘတွေ အဖို့နော်”
သားသမီးတွေအတွက်လည်းပဲ ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ မိဘဆိုတာ မရှိဘူးနော်။ ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလည်း ဒီလိုဘဝဆည်းဆာအချိန် ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး ဒီလိုပြောတာ။
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ (ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး)
လောက၌ကြိုတင်၍ မသိနိုင်သောအရာ (၅)မျိုးရှိတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုရင်….
(၁)ဇီဝိတံ။ အသက်ရှင်လျက် ဘယ်လောက်နေရဦးမယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ လောကကြီးမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရဦးမလဲ ဆိုတာကိုမသိနိုင္ဘူးတဲ့။
(၂)ဗျာဓိ။ ဘဝခရီးကို လျှေက်လှမ်းရတဲ့အခါမှာ ဘာရောဂါနဲ့ သေမယ်ဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။
(၃)ကာလော။ ကာလဆိုတာလူတစ်ယောက်ဟာ ဘဝခရီး အဆုံးသတ်မယ့်အချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲ။ မနက်လား၊ နေ့လည်လား၊ ညလားပြောလို့ မရဘူးတဲ့။
အမှတ်တမဲ့နေရင်တော့ မသိဘူးပေါ့ အမှတ်နဲ့ နေမယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်သိနေမှာပဲ မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ ဖြစ်နေကြတာတွေချည်းပါပဲ။
(၄)ဒေဟနိက္ခေပနံ။ ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို ဘယ်နေရာမှာ သဂြိုလ်မယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ မြှုပ်နှံမယ်ဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်ဘူး။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလောင်းကို ဘယ်နေရာမှာ မြှုပ်နှံမယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ သဂြိုလ်မလဲဆိုတာကိုလည်း မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ နောက်မသိနိုင်တာ တစ်ခုက ဘာလဲဆိုရင်…
အဲဒီငါးဌာနက ဘာတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင် ၁။နတ်ပြည် ကုသိုလ်ကံတွေ အကျိုးပေးလို့ ရောက်သွားနိုင်တဲ့ နတ်ပြည်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက ၂။လူ့ပြည်ပဲ။ အကုသိုလ်ကံတွေ အကျိုးပေးလို့ ရောက်သွားနိုင်တာက ၃။ပြိတ္တာ ၄။တိရစ္ဆာန် ၅။ငရဲ အားလုံး ငါးမျိုးရှိတယ်။
အဲဒီတော့ ပုထုဇဉ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝနိဂုံး အဆုံးသတ် သွားပြီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်ဘဝမှာ ပြန်လည်မွေးဖွားမလဲဆိုတာ ပြောလို့မရဘူးတဲ့။
သေဆုံးတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်မှာ မူတည်သွားတယ်တဲ့။ သောတာပန် မဖြစ်သေးသမျှ “နိယတဂတိ”ကိုယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာ တစ်ခုကို သွားလို့မရေသးဘူးတဲ့။
ဘုရားအလောင်းကြီးတောင်မှ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်။ ငရဲကျတဲ့အခါ ကျသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သေခါနီးအချိန်မှာ ဘာတွေနဲ့ကြုံပြီးဘာစိတ်နဲ့ သေမယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ မရလို့ပေါ့နော်။
ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းပြီဆိုရင် လူတိုင်းဟာ ဒီအချက်ကို ကြိုတင်မပြောနိုင်ကြပါဘူးတဲ့။
သေအံ့မူးမူးအချိန် ရောက်နေပြီဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကိုယ့်ကိုကယ်တင် မပေးနိုင်တော့ဘူး။ မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားတယ် “န သန်တိ ပုတ်တာ တာဏာယ”တဲ့ “လောကမှာ သေခြင်းတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ သားသမီးဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ မိဘတွေ အဖို့နော်”
သားသမီးတွေအတွက်လည်းပဲ ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ မိဘဆိုတာ မရှိဘူးနော်။ ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလည်း ဒီလိုဘဝဆည်းဆာအချိန် ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး ဒီလိုပြောတာ။
ပါခြုပျဆရာတျောဘုရားကွီးရဲ့ လာဘျ၊ ကံကောငျးအောငျ ပွုမှုနထေိုငျနညျးတရားတျော…
လောကမှာ ကံမကောငျးဘူးဆိုရငျ ကံကောငျးအောငျက ဘာလုပျရမှာလဲ၊ မကောငျးတဲ့ ကံတှေ ပပြောကျအောငျ ကံကောငျးတဲ့ နညျးတှေ မရှိဘူးလားဆို ရှိတယျ။အကုသိုလျအကြိုးတှေ ဝငျရောကျ ဖွဈပျေါနတောကို လူတှကေ ကံမကောငျးဘူးလို့ ပွောတာ။ အကုသိုလျရဲ့ အကြိုးတရားတှကေ ကိုယျ့သန်တာနျရောကျပွီ၊ ထိခိုကျနပွေီဆိုရငျ ဒါက ကံမကောငျးဘူးလို့ ပွောကွတယျ။အဲဒီ အခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့လုပျရပျကို ပွနျဆနျးစဈကွညျ့ ရမယျ။ ငါတို့လုပျနတော အမှားမရှိဘူး၊ အကောငျးတှေ လုပျတယျ။ သို့သျော အတိတျတုနျးက မှားယှငျးမှုတှကေလညျး လူတှရေဲ့သန်တာနျ လာရောကျပွီး အကြိုးပေးနတောတှေ ရှိတတျ တယျပေါ့။
အဲဒီလို ဖွဈပျေါ လာတာမြိုးတှကေော မရှိနိုငျဘူးလားဆို ရှိနိုငျတယျ။ ရှိလာလို့ရှိရငျ ဘာနဲ့ အကာအကှယျ လုပျရမလဲလို့ ဆိုရငျ ကံကောငျးအောငျ ကောငျးတဲ့ ကံတရားတှကေို ကွိုးစားပွီး လုပျရမယျ။ ဘုရားကို အာရုံပွုမယျ၊ သံဃာကို အာရုံပွုမယျ။ဘုရားရဲ့ နှုတျကပတျတျောတှကေိုရှတျဖတျ သရဇ်ဈာယျမယျ။ ဘုရားကို ပူဇျောမယျနျော။ ဘုရားနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျကွညျနူးမှုတှေ ရအောငျ လုပျရမယျ။ ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ မပွတျ လုပျပေး ရမယျ။ဘုရားပနျး၊ ရခေမျြး အမွဲတမျး ဆကျကပျ၊ ဘုရားကို အာရုံပွု၊ ကုသိုလျတရားတှကေို စိတျထဲမှာ ဖွဈပှားအောငျ ကွိုးစား၊ အဲဒီလို ကွိုးစားခွငျး အားဖွငျ့လညျးပဲ မကောငျးတဲ့ ကံတှေ ပပြောကျသှားနိုငျတယျ။
ကံဆိုး မိုးမှောငျကလြာတဲ့ အခါ ဖွဈလာမယျ့ အရိပျအရောငျရှိပွီ ဆိုတဲ့အခြိနျမှာ ဘာနဲ့ ကာကှယျရသလဲဆိုရငျ ဘုရားကို အာရုံပွုပွီး ဗုဒ်ဓါနုဿတိကို ပှားရမယျ။ဘုရားရဲ့ ဂုဏျတျောတှကေို အာရုံပွု၊ကမ်မဌာနျးထိုငျ၊ ဂုဏျတျောတှကေို နှလုံးသှငျးဆငျခွငျပွီး အခြိနျမြားမြား မွတျစှာဘုရားကို ပူဇျောရမယျ။လုပျပွီးတဲ့အခါ ကိုယျလုပျတဲ့ ကုသိုလျကောငျးမှုကို ကိုယျမမွငျရတဲ့ သတ်တဝါတှေ၊ကိုယျ့အနီးအပါးမှာရှိတဲ့ အိမျစောငျ့နတျတှကေို အမြှအတနျး ပေးဝရေမယျ။အဲဒီ အမြှအတနျး ပေးဝခွေငျးအားဖွငျ့ ကိုယျနဲ့ သူတို့နဲ့က မိတျဆှဖွေဈသှားတယျ။ခငျမငျရငျးနှီးမှုတှေ ရလာတယျ။ မိတျဆှဖွေဈလို့ ရှိရငျ ကိုယျ အန်တရာယျ မရောကျအောငျ သူတို့က ကွညျ့ရှုပေးတယျ။ အိမျနားနီးခငျြးနဲ့ တညျ့အောငျ ပေါငျးရငျတောငျမှပဲ ကိုယျ့အိမျ ကွညျ့ပေးဖျော ရမယျ။
မတညျ့ဘူးဆိုရငျ မသိခငျြယောငျဆောငျနမှော ဘာကွီးဖွဈနနေေ၊ ဟုတျကဲ့လား။ အဲဒါလိုပဲ ကိုယျမမွငျရလို့ အိမျစောငျ့နတျတို့၊ ကိုယျစောငျ့နတျတို့ သှားပွီးတော့ ရနျမဖွဈလနေဲ့။ ရနျဖွဈရငျတော့ အဲဒါ ကိုယျ့ကို ကောငျးကြိုးပေးမှာ မဟုတျဘူးနျော။ ဘယျသူနဲ့မှ ရနျမဖွဈနဲ့။နောကျဆုံးမှာ ကိုယျ့ရဲ့အိမျက မှေးထားတဲ့ ခှေးနဲ့တောငျ ရနျဖွဈရငျ ကိုယျ့ကို မကျြစောငျးထိုးကွညျ့တာ အနညျးဆုံး ခံရမယျ။ ကွောကျလို့သာ ပွနျမလုပျတာ ရှိမယျနျော။ ဒီတိရစ်ဆာနျတှမှောလညျး အသိရှိတယျလေ။ တဈခါလောကျ ရိုကျထားတဲ့သူဆိုရငျ ရှောငျပရှေောငျပနေဲ့ မကျြစောငျးထိုး ကွညျ့တယျ။သူတို့ အမွဲတနျး ငါ့မြား ဘာလုပျမလဲဆိုပွီး ဒေါသနဲ့ ကွညျ့တာ။ ဘယျသူနဲ့မှ ရနျမဖွဈဘဲ မတ်ေတာသကျရောကျအောငျ လုပျတာဟာ ကိုယျ့အတှကျ ကံကောငျးစခွေငျးရဲ့ အကွောငျးတဈခုပဲ ဖွဈတယျပေါ့။ ကိုယျ့အတှကျ အကူအညီရခွငျးပဲ။
မတ်ေတာပို့ရတယျ။ အမြှအတနျး ပေးဝရေတယျ။ ကုသိုလျကောငျးမှု လုပျတိုငျးလုပျတိုငျး ဖိတျကွားပွီးတော့ သူတို့ကို အရေးတယူ လုပျရတယျ။ မိတျဆှကေောငျးတောငျမှ လမျးမှာတှရေ့ငျ ကိုယျက အရငျချေါရတယျ။ အရေးတယူ နှုတျဆကျရငျ ရငျးနှီးတယျ။မချေါခငျြသလိုလို လုပျသှားရငျ သူကလညျး မချေါခငျြသလိုလို ပွနျလုပျမှာပဲ။ လူအခငျြးခငျြးတောငျ ဒီလို ဖွဈလာတယျ။ အဲဒါကွောငျ့မို့ ကံကောငျးအောငျ လုပျဖို့ ဆိုသညျမှာ ကိုယျကိုယျတိုငျက ရငျထဲက အမုနျးကငျးပွီး မတ်ေတာဘာဝနာတှေ မြားမြားပှားရမယျ။မတ်ေတာပို့မယျ၊ အမြှအတနျး ပေးဝမေယျ၊ အားလုံးနဲ့ မိတျဆှတှေဖွေဈမယျ။ အရာရာမှာ စိတျကွညျနူးမှုတှေ ရလာတဲ့အခါမှာ ကိုယျတှေးတာတှေ၊ ကိုယျကွံတာတှေ၊ ကိုယျလုပျတာတှလေညျး လမျးမှနျပျေါ ရောကျလာနိုငျတယျပေါ့။
`ကံမကောငျး အကွောငျးမလှ` လို့ မကောငျးတာတှနေဲ့ စိတျကညဈနရေငျ ပိုဆိုးသှားနိုငျတယျ။ အဲဒီလိုမဖွဈရအောငျ သတိရှိရမယျ။ ဘယျသူပဲဖွဈဖွဈ ကံကွမ်မာရဲ့အလှညျ့အပွောငျးကွောငျ့ ကံကောငျးတဲ့အခါ ကောငျးတယျ၊ မကောငျးတဲ့အခါ မကောငျးဘူး။ဘုရားဂုဏျတျောတှကေို ကိုယျ့ရဲ့ ရငျထဲနှလုံးထဲ ရောကျအောငျ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုကို ပေးနိုငျတဲ့ဟာမြိုးဖွဈအောငျ လုပျရမယျ။ ပွီးပွီဆိုပွီးတော့မှ ကိုယျ့ရဲ့ (wish) ကို ဖျောပွတာ။ ဆုတောငျးတိုငျးကတော့ မရဘူးပေါ့။ ဆုတောငျးတိုငျး ရလို့ရှိရငျ ဘာမှ လုပျမနနေဲ့။ထိုငျပွီးတော့ ဆုသာ ဆုတောငျး။ စာမေးပှဲအောငျလို့ရှိရငျ ဒီ ၃- လုံးပါပါစေ၊ ၆- လုံး ပါပါစေ၊ ထိုငျသာ ဆုတောငျးနေ၊ စာမကကျြနဲ့၊ ရမှာ မဟုတျဘူးနျော။ အဲဒါကွောငျးမို့လို့ ဆုတောငျးရုံနဲ့ ဘယျအရာမှ မရဘူး။
ဆုတောငျးတယျဆိုတာ wish ကိုဖျောပွတာပဲ ဖွဈတယျ။ ဆုတောငျးတာ လိုခငျြတဲ့ ဆန်ဒရဲ့နောကျမှာ လုံ့လ ဝီရိယတို့၊ အသိဉာဏျတို့ဆိုတာတှေ လိုအပျတယျပေါ့။အဲဒီလို အကွောငျးအကြိုး ဆီလြှျောစှာ အလုပျလုပျမှ ကောငျးကြိုးခမျြးသာတှဆေိုတာ ရနိုငျတယျ။ အဲဒီလို အခကျြတှကေိုလညျး မွတျစှာဘုရား ဟောတာဖွဈတယျ။ဗုဒ်ဓဆိုတဲ့ ဂုဏျတျောတှထေဲမှာအရာခပျသိမျးကို သိစှမျးနိုငျတဲ့ အသိဉာဏျရှိလို့ `ဗုဒ်ဓ` ဆိုတာကို အာရုံပွုပွီးတော့ နှလုံးသှငျး ဆငျခွငျခွငျးအားဖွငျ့ မိမိအတှကျ ကံကောငျးလာနိုငျတယျဆိုတာ ယုံကွညျကွရမှာ ဖွဈတယျ။ပါမောက်ခခြုပျဆရာတျော ဒေါကျတာအရှငျနန်ဒမာလာဘိဝံသ(မွတျဗုဒ်ဓ၏ ဂုဏျတျောကိုးပါး တရားတျောမှ ကောကျနှုတျပူဇျောပါသညျ)
လောကမှာ ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင်က ဘာလုပ်ရမှာလဲ၊ မကောင်းတဲ့ ကံတွေ ပပျောက်အောင် ကံကောင်းတဲ့ နည်းတွေ မရှိဘူးလားဆို ရှိတယ်။အကုသိုလ်အကျိုးတွေ ဝင်ရောက် ဖြစ်ပေါ်နေတာကို လူတွေက ကံမကောင်းဘူးလို့ ပြောတာ။ အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးတရားတွေက ကိုယ့်သန္တာန်ရောက်ပြီ၊ ထိခိုက်နေပြီဆိုရင် ဒါက ကံမကောင်းဘူးလို့ ပြောကြတယ်။အဲဒီ အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့် ရမယ်။ ငါတို့လုပ်နေတာ အမှားမရှိဘူး၊ အကောင်းတွေ လုပ်တယ်။ သို့သော် အတိတ်တုန်းက မှားယွင်းမှုတွေကလည်း လူတွေရဲ့သန္တာန် လာရောက်ပြီး အကျိုးပေးနေတာတွေ ရှိတတ် တယ်ပေါ့။
အဲဒီလို ဖြစ်ပေါ် လာတာမျိုးတွေကော မရှိနိုင်ဘူးလားဆို ရှိနိုင်တယ်။ ရှိလာလို့ရှိရင် ဘာနဲ့ အကာအကွယ် လုပ်ရမလဲလို့ ဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ကောင်းတဲ့ ကံတရားတွေကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ရမယ်။ ဘုရားကို အာရုံပြုမယ်၊ သံဃာကို အာရုံပြုမယ်။ဘုရားရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်မယ်။ ဘုရားကို ပူဇော်မယ်နော်။ ဘုရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကြည်နူးမှုတွေ ရအောင် လုပ်ရမယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ မပြတ် လုပ်ပေး ရမယ်။ဘုရားပန်း၊ ရေချမ်း အမြဲတမ်း ဆက်ကပ်၊ ဘုရားကို အာရုံပြု၊ ကုသိုလ်တရားတွေကို စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပွားအောင် ကြိုးစား၊ အဲဒီလို ကြိုးစားခြင်း အားဖြင့်လည်းပဲ မကောင်းတဲ့ ကံတွေ ပပျောက်သွားနိုင်တယ်။
ကံဆိုး မိုးမှောင်ကျလာတဲ့ အခါ ဖြစ်လာမယ့် အရိပ်အရောင်ရှိပြီ ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ဘာနဲ့ ကာကွယ်ရသလဲဆိုရင် ဘုရားကို အာရုံပြုပြီး ဗုဒ္ဓါနုဿတိကို ပွားရမယ်။ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို အာရုံပြု၊ကမ္မဌာန်းထိုင်၊ ဂုဏ်တော်တွေကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီး အချိန်များများ မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ရမယ်။လုပ်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ သတ္တဝါတွေ၊ကိုယ့်အနီးအပါးမှာရှိတဲ့ အိမ်စောင့်နတ်တွေကို အမျှအတန်း ပေးဝေရမယ်။အဲဒီ အမျှအတန်း ပေးဝေခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့ သူတို့နဲ့က မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်။ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေ ရလာတယ်။ မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ ရှိရင် ကိုယ် အန္တရာယ် မရောက်အောင် သူတို့က ကြည့်ရှုပေးတယ်။ အိမ်နားနီးချင်းနဲ့ တည့်အောင် ပေါင်းရင်တောင်မှပဲ ကိုယ့်အိမ် ကြည့်ပေးဖော် ရမယ်။
မတည့်ဘူးဆိုရင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေမှာ ဘာကြီးဖြစ်နေနေ၊ ဟုတ်ကဲ့လား။ အဲဒါလိုပဲ ကိုယ်မမြင်ရလို့ အိမ်စောင့်နတ်တို့၊ ကိုယ်စောင့်နတ်တို့ သွားပြီးတော့ ရန်မဖြစ်လေနဲ့။ ရန်ဖြစ်ရင်တော့ အဲဒါ ကိုယ့်ကို ကောင်းကျိုးပေးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်မဖြစ်နဲ့။နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်က မွေးထားတဲ့ ခွေးနဲ့တောင် ရန်ဖြစ်ရင် ကိုယ့်ကို မျက်စောင်းထိုးကြည့်တာ အနည်းဆုံး ခံရမယ်။ ကြောက်လို့သာ ပြန်မလုပ်တာ ရှိမယ်နော်။ ဒီတိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း အသိရှိတယ်လေ။ တစ်ခါလောက် ရိုက်ထားတဲ့သူဆိုရင် ရှောင်ပေရှောင်ပေနဲ့ မျက်စောင်းထိုး ကြည့်တယ်။သူတို့ အမြဲတန်း ငါ့များ ဘာလုပ်မလဲဆိုပြီး ဒေါသနဲ့ ကြည့်တာ။ ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်မဖြစ်ဘဲ မေတ္တာသက်ရောက်အောင် လုပ်တာဟာ ကိုယ့်အတွက် ကံကောင်းစေခြင်းရဲ့ အကြောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ကိုယ့်အတွက် အကူအညီရခြင်းပဲ။
မေတ္တာပို့ရတယ်။ အမျှအတန်း ပေးဝေရတယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်း ဖိတ်ကြားပြီးတော့ သူတို့ကို အရေးတယူ လုပ်ရတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတောင်မှ လမ်းမှာတွေ့ရင် ကိုယ်က အရင်ခေါ်ရတယ်။ အရေးတယူ နှုတ်ဆက်ရင် ရင်းနှီးတယ်။မခေါ်ချင်သလိုလို လုပ်သွားရင် သူကလည်း မခေါ်ချင်သလိုလို ပြန်လုပ်မှာပဲ။ လူအချင်းချင်းတောင် ဒီလို ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကံကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ရင်ထဲက အမုန်းကင်းပြီး မေတ္တာဘာဝနာတွေ များများပွားရမယ်။မေတ္တာပို့မယ်၊ အမျှအတန်း ပေးဝေမယ်၊ အားလုံးနဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်မယ်။ အရာရာမှာ စိတ်ကြည်နူးမှုတွေ ရလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်တွေးတာတွေ၊ ကိုယ်ကြံတာတွေ၊ ကိုယ်လုပ်တာတွေလည်း လမ်းမှန်ပေါ် ရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့။
`ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ` လို့ မကောင်းတာတွေနဲ့ စိတ်ကညစ်နေရင် ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်ရအောင် သတိရှိရမယ်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကံကြမ္မာရဲ့အလှည့်အပြောင်းကြောင့် ကံကောင်းတဲ့အခါ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းတဲ့အခါ မကောင်းဘူး။ဘုရားဂုဏ်တော်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ထဲနှလုံးထဲ ရောက်အောင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။ ပြီးပြီဆိုပြီးတော့မှ ကိုယ့်ရဲ့ (wish) ကို ဖော်ပြတာ။ ဆုတောင်းတိုင်းကတော့ မရဘူးပေါ့။ ဆုတောင်းတိုင်း ရလို့ရှိရင် ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့။ထိုင်ပြီးတော့ ဆုသာ ဆုတောင်း။ စာမေးပွဲအောင်လို့ရှိရင် ဒီ ၃- လုံးပါပါစေ၊ ၆- လုံး ပါပါစေ၊ ထိုင်သာ ဆုတောင်းနေ၊ စာမကျက်နဲ့၊ ရမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အဲဒါကြောင်းမို့လို့ ဆုတောင်းရုံနဲ့ ဘယ်အရာမှ မရဘူး။
ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ wish ကိုဖော်ပြတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဆုတောင်းတာ လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒရဲ့နောက်မှာ လုံ့လ ဝီရိယတို့၊ အသိဉာဏ်တို့ဆိုတာတွေ လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲဒီလို အကြောင်းအကျိုး ဆီလျှော်စွာ အလုပ်လုပ်မှ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆိုတာ ရနိုင်တယ်။ အဲဒီလို အချက်တွေကိုလည်း မြတ်စွာဘုရား ဟောတာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ ဂုဏ်တော်တွေထဲမှာအရာခပ်သိမ်းကို သိစွမ်းနိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်ရှိလို့ `ဗုဒ္ဓ` ဆိုတာကို အာရုံပြုပြီးတော့ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအတွက် ကံကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ(မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော်ကိုးပါး တရားတော်မှ ကောက်နှုတ်ပူဇော်ပါသည်)
သားခွရောတဈတောငျ မောငျမဲခေါငျနှငျ့မိခငျဖွဈသူ ဖြာလိပျနတျမအောငျဖွူတို့ရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျး
သားခွရောတဈတောငျ မောငျမဲခေါငျနှငျ့မိခငျဖွဈသူ ဖြာလိပျနတျမအောငျဖွူတို့ရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျး။ သားခွရောတဈတောငျ မောငျမဲခေါငျနှငျ့မိခငျဖွဈသူ ဖြာလိပျနတျမအောငျဖွူတို့ရဲ့ ဘဝဇတျကွောငျး။ ပုဂံပွညျကစြှာမငျးကွီး နနျးစံသောခြိနျအခါကဖွဈလသေညျ။
အောကျမွို့၊ဒသေမွို့၊သုံးမွို့ကို အပိုငျစားရသောသုံးမွို့ရှငျသညျ သာယာဝတီမွို့ကို တညျရာတှငျ မွို့ရိုးတံတိုငျးထူ၍မရသောကွောငျ့ ပုဏ်ဏားဖွူ၊ ပုဏ်ဏားညိုတို့အား မေးမွနျးလသေညျ။ ပုဏ်ဏားတို့က
“အောငျပါသောတနင်ျဂနှသေမီးတဈယောကျကို ဖြာလိပျကိုပှလေ့ကျြ သံခမောကျဆောငျးကာ သပွခေကျကိုနားမှာပနျလကျြ အခြိနျခါ ကလြှငျလာပါလိမျ့မညျ။ ယငျးတနင်ျဂနှေ သမီးကိုစတေးပါက အောငျမွငျပါလိမျ့မညျ” ဟုလြှောကျတငျကွလသေညျ။
ထိုအခါမငျးအမိနျ့ အရမငျးမှုထမျးတို့သညျ ထိုနရောတှငျ အောငျပါသောအမြိုးသမီး လာရာအရပျကို စောငျ့မြှျော၍နကွေလသေညျ။ သုံးမွို့ရှငျ၏တူတျောစပျသူ ပညာဗလအမတျသညျ လူကွီးမြားကစစေ့ပျပေးစားသော မွို့ဝနျသမီးကိုမယူပဲ ရှာသူကွီးသမီး မအောငျဖွူကိုသာယူသဖွငျ့
မွို့ဝနျမငျးသညျ ပညာဗလအပျေါတှငျအမကျြထှကျပွီး တိုငျးပွညျကိုလုပျကွံလိမျ့မညျဟု သတငျးလှငျ့၍သုံးမွို့ရှငျထံ၌ ကုနျးခြောစကားကို လြှောကျထားလသေညျ။ မွို့ဝနျ၏စကားကိုယုံကွညျပွီး သုံးမွို့ရှငျကလညျး ပညာဗလကို ဖမျးဆီးအကဉျြးခထြားသညျ။
ထို့ပွငျပညာဗလ၏နှမ “မမငျးလှ” ကိုပါဖမျးဆီးသိမျးယူရနျကွံပွနျသညျ။ မမငျးလှကဦးရီးတျောသုံးမွို့ရှငျ၏ ပွုမှုခကျြကိုမခံမရပျနိုငျဖွဈကာ ဦးရီးတျော၏အသိမျးပိုကျမခံပဲ မိမိကိုယျကိုအသကျအောငျ့၍သလေိုကျရာ သုံးပနျလှနတျဖွဈသှားလသေညျ။
ယငျးသုံးပနျလှနတျသညျ အပြိုဘဝ၌ကှယျလှနျသဖွငျ့ သမီးရညျးစားစုံတှဲနထေိုငျမှုမြား၊ အခဈြနှငျ့ပတျသကျသော ကိစ်စမြားကိုမကွိုကျခြေ။ မအောငျဖွူသညျယငျး၏ယောကျြား ရာဇဝတျသငျ့သညျဟုကွား၍ တှဆေုံ့ရနျလိုကျလာရာတှငျ မွို့ပျေါ၌ ခကျြပွုတျစားသောကျရနျအတှကျ သံဒယျအိုးယူဆောငျလာပွီး အပူဒဏျကိုကာသညျ့အနဖွေငျ့
ထိုသံဒယျကိုခေါငျးတှငျဆောငျးကာ အိပျရနျအတှကျဖြာကိုလိပျယူပိုကျပွီး လိုကျလာလသေညျ။ လမျးခရီး၌တှသေ့ော သပွခေကျအားပနျဆငျလိုကျသညျ။ ထို့ကွောငျ့မအောငျဖွူအား ထညျ့သှငျးကာစတေးလိုကျလသေညျ။
မစတေးမီမအောငျဖွူက အပွဈမရှိသောသူ့အား စတေးသညျ့အတှကျ သာယာဝတီနယျတှငျ ဆငျကောငျးမွငျးကောငျး မထှနျးကားပါစနှေငျ့ ထှနျးကားခဲ့ပါကလဲ အသဆေိုးပါစေ။ ဘုနျးကံကွီးသောယောကျြား မပျေါပါစနှေငျ့ ပျေါခဲ့သညျရှိသျော ငယျငယျရှယျရှယျနှငျ့ အသဆေိုးပါစေ။
မိနျးမကောငျးမထှနျးကားပါစနှေငျ့ ထှနျးကားပါကပွညျ့တနျဆာဖွဈပါစေ။ ကွီးပှားတိုးတကျခွငျးလညျး မရှိကွပါစနှေငျ့ဟု ကြိနျစာဆိုသှားလသေညျ။ ထို့ပွငျမိမိသညျ လငျကိုခဈြမွတျနိုးရာ ဖွဈလရောဘဝတှငျ လငျယောကျြားနှငျ့သာ ပေါငျးသငျးရပါစသေားဟူ၍လညျး ဆုတောငျးသှားလသေညျ။
(ထိုမအောငျဖွူ၏ကြိနျစာကွောငျ့ သာယာဝတီနယျသညျ လူမိုကျမြားပေါမြားသညျဟုဆိုစမှတျ ပွုကွသညျ) မအောငျဖွူသညျ စတေးခံရ၍ သဆေုံးသောအခါ စိတျကွမျးကိုယျကွမျးကြိနျဆဲ၍သရေသောကွောငျ့ နောငျဘဝတှငျဘီလူးမဖွဈသှားလသေညျ။
ဘီလူးမဖွဈသောအခါ ထောငျသှငျးအကဉျြးခထြားခွငျးခံရသော မိမိ၏လငျယောကျြားကို တနျခိုးဖွငျ့ယူဆောငျ၍ သူမပိုငျဆိုငျရာနယျပယျအတှငျးသို့ ချေါဆောငျသှားပွီး အတူတကှပေါငျးသငျး နထေိုငျကွလသေညျ။ မကွာခငျသားတဈယောကျ မှေးဖှားလသေညျ။
ထိုသားသညျဘီလူးမနှငျ့ လူသားညား၍ ပေါကျဖှားလာခဲ့သောကွောငျ့ ခှနျအားဗလကွီးမားကာ အရှယျရောကျခြိနျတှငျ ခွဖေဝါးသညျတဈတောငျခနျ့ရှိ၍ ယငျးကိုခွရောတဈတောငျ မောငျမဲခေါငျဟု ချေါတှငျလသေညျ။ ဆငျကိုပငျဖမျး၍ အစှယျကိုခြိုးနိုငျသော ခှနျအားဗလစှမျးရညျ သတ်တိနှငျ့လညျးပွညျ့စုံလသေညျ။
မောငျမဲခေါငျသညျ ဖခငျ၏ပွောပွခကျြအရ လူသားမြားနထေိုငျရာကို သှားခငျြလှသညျကတဈကွောငျး၊ မယျတျောကလညျးဘီလူးမ ဖွဈနသေညျကတဈကွောငျးတို့ကွောငျ့ ထိုနရောတှငျနလေိုစိတျမရှိပေ။
တဈနတှေ့ငျမယျတျောပွငျပထှကျ၍ အစာရှာနခေိုကျ ဖခငျကိုထမျး၍ထှကျပွေးလသေညျ။ မယျတျောဘီလူးမကလညျးပွနျရောကျ၍ သိလြှငျသိခငျြးလိုကျလရော သူပိုငျသောနယျပယျကို ကြျောသှားပွီဖွဈသညျ့အတှကျ ဆကျလကျမလိုကျနိုငျတော့ပဲ သားနှငျ့လငျအတှကျ အပူမီးတောကျလောငျကာ ရငျကှဲနာကပြွီးသဆေုံးလသေညျ။
ဘီလူးမဘဝမှသဆေုံးစဉျကို စိတျစောနေ၍ လူ့ဘဝမအောငျဖွူဖွဈစဉျက ကနျြရဈခဲ့သောဖြာလိပျကို သတိရစှဲလမျးခကျြဥပါဒါနျကွောငျ့ ဖြာလိပျနတျမအောငျဖွူ ဖွဈလာလသေညျ။ ဖြာလိပျနတျမအောငျဖွူသညျ လငျနှငျ့သားကိုစိတျနာသော ကွောငျ့သူမကို တငျမွှောကျပသသောအခါ ယောကျြားမြားကိုငျတှယျ ပူဇျောပသခွငျးမပွုရပေ။
မိနျးမမြားသာပူဇျောပသရသညျ။ ဖြာလိပျနတျမအောငျဖွူတငျမွှောကျရာတှငျ ကနျတော့ပှဲ၌ထညျ့ရိုးထုံးစံဖွဈအုနျး၊ ငှကျပြောကိုထညျ့ပွီး ပှဲရှေ့၌ဖြာလိပျသဈတှငျ ထဘီ၊အင်ျကြီ၊ဆံစု၊ဘီးစသညျဖွငျ့ လူကဲ့သို့ဝတျဆငျလကျြ ကြောကျပွငျ၊သနပျခါးတုံး၊မှနျတို့ဖွငျ့ အဆငျသငျ့ထားပေးရသညျ။
အပြိုအရှယျမိနျးမပြို ကလေးမြားဆုံမိကွသညျ့အခါ မိမိရညျမှနျးထားသူနှငျ့ ပေါငျးသငျးရမှုမှနျပါလြှငျ မအောငျဖွူသခငျမကွီးက ဘယျနှဈခကျြရိုကျပွတျောမူပါဟု အပြျောပါးရယျစရာ မေးမွနျးကွလရှေိ့သညျ။ အမြိုးသမီးလောကတှငျ ထငျရှားသောနတျတဈပါးဖွဈလသေညျ။
မအောငျဖွူနတျဝငျပါက ဖြာလိပျဘယျညာယိမျးပွသညျဟု ယုံကွညျကွလသေညျ။ ကွို့ပငျကောကျမွို့သို့ ကွုံတုနျးကွုံခိုကျရောကျရှိပါက သှားရောကျလလေ့ာနိုငျပါကွောငျး ဖိတျချေါအပျပါသညျ။ ကိုယျတိုငျသှားရောကျလလေ့ာရသလောကျ ပွနျလညျမြှဝခွေငျးပါ။ လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈပေးပါသညျ။
သားခြေရာတစ်တောင် မောင်မဲခေါင်နှင့်မိခင်ဖြစ်သူ ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူတို့ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း။ သားခြေရာတစ်တောင် မောင်မဲခေါင်နှင့်မိခင်ဖြစ်သူ ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူတို့ရဲ့ ဘဝဇတ်ကြောင်း။ ပုဂံပြည်ကျစွာမင်းကြီး နန်းစံသောချိန်အခါကဖြစ်လေသည်။
အောက်မြို့၊ဒေသမြို့၊သုံးမြို့ကို အပိုင်စားရသောသုံးမြို့ရှင်သည် သာယာဝတီမြို့ကို တည်ရာတွင် မြို့ရိုးတံတိုင်းထူ၍မရသောကြောင့် ပုဏ္ဏားဖြူ၊ ပုဏ္ဏားညိုတို့အား မေးမြန်းလေသည်။ ပုဏ္ဏားတို့က
“အောင်ပါသောတနင်္ဂနွေသမီးတစ်ယောက်ကို ဖျာလိပ်ကိုပွေ့လျက် သံခမောက်ဆောင်းကာ သပြေခက်ကိုနားမှာပန်လျက် အချိန်ခါ ကျလျှင်လာပါလိမ့်မည်။ ယင်းတနင်္ဂနွေ သမီးကိုစတေးပါက အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်” ဟုလျှောက်တင်ကြလေသည်။
ထိုအခါမင်းအမိန့် အရမင်းမှုထမ်းတို့သည် ထိုနေရာတွင် အောင်ပါသောအမျိုးသမီး လာရာအရပ်ကို စောင့်မျှော်၍နေကြလေသည်။ သုံးမြို့ရှင်၏တူတော်စပ်သူ ပညာဗလအမတ်သည် လူကြီးများကစေ့စပ်ပေးစားသော မြို့ဝန်သမီးကိုမယူပဲ ရွာသူကြီးသမီး မအောင်ဖြူကိုသာယူသဖြင့်
မြို့ဝန်မင်းသည် ပညာဗလအပေါ်တွင်အမျက်ထွက်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုလုပ်ကြံလိမ့်မည်ဟု သတင်းလွှင့်၍သုံးမြို့ရှင်ထံ၌ ကုန်းချောစကားကို လျှောက်ထားလေသည်။ မြို့ဝန်၏စကားကိုယုံကြည်ပြီး သုံးမြို့ရှင်ကလည်း ပညာဗလကို ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားသည်။
ထို့ပြင်ပညာဗလ၏နှမ “မမင်းလှ” ကိုပါဖမ်းဆီးသိမ်းယူရန်ကြံပြန်သည်။ မမင်းလှကဦးရီးတော်သုံးမြို့ရှင်၏ ပြုမှုချက်ကိုမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ ဦးရီးတော်၏အသိမ်းပိုက်မခံပဲ မိမိကိုယ်ကိုအသက်အောင့်၍သေလိုက်ရာ သုံးပန်လှနတ်ဖြစ်သွားလေသည်။
ယင်းသုံးပန်လှနတ်သည် အပျိုဘဝ၌ကွယ်လွန်သဖြင့် သမီးရည်းစားစုံတွဲနေထိုင်မှုများ၊ အချစ်နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စများကိုမကြိုက်ချေ။ မအောင်ဖြူသည်ယင်း၏ယောက်ျား ရာဇဝတ်သင့်သည်ဟုကြား၍ တွေ့ဆုံရန်လိုက်လာရာတွင် မြို့ပေါ်၌ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရန်အတွက် သံဒယ်အိုးယူဆောင်လာပြီး အပူဒဏ်ကိုကာသည့်အနေဖြင့်
ထိုသံဒယ်ကိုခေါင်းတွင်ဆောင်းကာ အိပ်ရန်အတွက်ဖျာကိုလိပ်ယူပိုက်ပြီး လိုက်လာလေသည်။ လမ်းခရီး၌တွေ့သော သပြေခက်အားပန်ဆင်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်မအောင်ဖြူအား ထည့်သွင်းကာစတေးလိုက်လေသည်။
မစတေးမီမအောင်ဖြူက အပြစ်မရှိသောသူ့အား စတေးသည့်အတွက် သာယာဝတီနယ်တွင် ဆင်ကောင်းမြင်းကောင်း မထွန်းကားပါစေနှင့် ထွန်းကားခဲ့ပါကလဲ အသေဆိုးပါစေ။ ဘုန်းကံကြီးသောယောက်ျား မပေါ်ပါစေနှင့် ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသော် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အသေဆိုးပါစေ။
မိန်းမကောင်းမထွန်းကားပါစေနှင့် ထွန်းကားပါကပြည့်တန်ဆာဖြစ်ပါစေ။ ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလည်း မရှိကြပါစေနှင့်ဟု ကျိန်စာဆိုသွားလေသည်။ ထို့ပြင်မိမိသည် လင်ကိုချစ်မြတ်နိုးရာ ဖြစ်လေရာဘဝတွင် လင်ယောက်ျားနှင့်သာ ပေါင်းသင်းရပါစေသားဟူ၍လည်း ဆုတောင်းသွားလေသည်။
(ထိုမအောင်ဖြူ၏ကျိန်စာကြောင့် သာယာဝတီနယ်သည် လူမိုက်များပေါများသည်ဟုဆိုစမှတ် ပြုကြသည်) မအောင်ဖြူသည် စတေးခံရ၍ သေဆုံးသောအခါ စိတ်ကြမ်းကိုယ်ကြမ်းကျိန်ဆဲ၍သေရသောကြောင့် နောင်ဘဝတွင်ဘီလူးမဖြစ်သွားလေသည်။
ဘီလူးမဖြစ်သောအခါ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားခြင်းခံရသော မိမိ၏လင်ယောက်ျားကို တန်ခိုးဖြင့်ယူဆောင်၍ သူမပိုင်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အတူတကွပေါင်းသင်း နေထိုင်ကြလေသည်။ မကြာခင်သားတစ်ယောက် မွေးဖွားလေသည်။
ထိုသားသည်ဘီလူးမနှင့် လူသားညား၍ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သောကြောင့် ခွန်အားဗလကြီးမားကာ အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ခြေဖဝါးသည်တစ်တောင်ခန့်ရှိ၍ ယင်းကိုခြေရာတစ်တောင် မောင်မဲခေါင်ဟု ခေါ်တွင်လေသည်။ ဆင်ကိုပင်ဖမ်း၍ အစွယ်ကိုချိုးနိုင်သော ခွန်အားဗလစွမ်းရည် သတ္တိနှင့်လည်းပြည့်စုံလေသည်။
မောင်မဲခေါင်သည် ဖခင်၏ပြောပြချက်အရ လူသားများနေထိုင်ရာကို သွားချင်လှသည်ကတစ်ကြောင်း၊ မယ်တော်ကလည်းဘီလူးမ ဖြစ်နေသည်ကတစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် ထိုနေရာတွင်နေလိုစိတ်မရှိပေ။
တစ်နေ့တွင်မယ်တော်ပြင်ပထွက်၍ အစာရှာနေခိုက် ဖခင်ကိုထမ်း၍ထွက်ပြေးလေသည်။ မယ်တော်ဘီလူးမကလည်းပြန်ရောက်၍ သိလျှင်သိချင်းလိုက်လေရာ သူပိုင်သောနယ်ပယ်ကို ကျော်သွားပြီဖြစ်သည့်အတွက် ဆက်လက်မလိုက်နိုင်တော့ပဲ သားနှင့်လင်အတွက် အပူမီးတောက်လောင်ကာ ရင်ကွဲနာကျပြီးသေဆုံးလေသည်။
ဘီလူးမဘဝမှသေဆုံးစဉ်ကို စိတ်စောနေ၍ လူ့ဘဝမအောင်ဖြူဖြစ်စဉ်က ကျန်ရစ်ခဲ့သောဖျာလိပ်ကို သတိရစွဲလမ်းချက်ဥပါဒါန်ကြောင့် ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူ ဖြစ်လာလေသည်။ ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူသည် လင်နှင့်သားကိုစိတ်နာသော ကြောင့်သူမကို တင်မြှောက်ပသသောအခါ ယောက်ျားများကိုင်တွယ် ပူဇော်ပသခြင်းမပြုရပေ။
မိန်းမများသာပူဇော်ပသရသည်။ ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူတင်မြှောက်ရာတွင် ကန်တော့ပွဲ၌ထည့်ရိုးထုံးစံဖြစ်အုန်း၊ ငှက်ပျောကိုထည့်ပြီး ပွဲရှေ့၌ဖျာလိပ်သစ်တွင် ထဘီ၊အင်္ကျီ၊ဆံစု၊ဘီးစသည်ဖြင့် လူကဲ့သို့ဝတ်ဆင်လျက် ကျောက်ပြင်၊သနပ်ခါးတုံး၊မှန်တို့ဖြင့် အဆင်သင့်ထားပေးရသည်။
အပျိုအရွယ်မိန်းမပျို ကလေးများဆုံမိကြသည့်အခါ မိမိရည်မှန်းထားသူနှင့် ပေါင်းသင်းရမှုမှန်ပါလျှင် မအောင်ဖြူသခင်မကြီးက ဘယ်နှစ်ချက်ရိုက်ပြတော်မူပါဟု အပျော်ပါးရယ်စရာ မေးမြန်းကြလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးလောကတွင် ထင်ရှားသောနတ်တစ်ပါးဖြစ်လေသည်။
မအောင်ဖြူနတ်ဝင်ပါက ဖျာလိပ်ဘယ်ညာယိမ်းပြသည်ဟု ယုံကြည်ကြလေသည်။ ကြို့ပင်ကောက်မြို့သို့ ကြုံတုန်းကြုံခိုက်ရောက်ရှိပါက သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာရသလောက် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါ။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
အောက်မြို့၊ဒေသမြို့၊သုံးမြို့ကို အပိုင်စားရသောသုံးမြို့ရှင်သည် သာယာဝတီမြို့ကို တည်ရာတွင် မြို့ရိုးတံတိုင်းထူ၍မရသောကြောင့် ပုဏ္ဏားဖြူ၊ ပုဏ္ဏားညိုတို့အား မေးမြန်းလေသည်။ ပုဏ္ဏားတို့က
ထို့ပြင်ပညာဗလ၏နှမ “မမင်းလှ” ကိုပါဖမ်းဆီးသိမ်းယူရန်ကြံပြန်သည်။ မမင်းလှကဦးရီးတော်သုံးမြို့ရှင်၏ ပြုမှုချက်ကိုမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ ဦးရီးတော်၏အသိမ်းပိုက်မခံပဲ မိမိကိုယ်ကိုအသက်အောင့်၍သေလိုက်ရာ သုံးပန်လှနတ်ဖြစ်သွားလေသည်။
မစတေးမီမအောင်ဖြူက အပြစ်မရှိသောသူ့အား စတေးသည့်အတွက် သာယာဝတီနယ်တွင် ဆင်ကောင်းမြင်းကောင်း မထွန်းကားပါစေနှင့် ထွန်းကားခဲ့ပါကလဲ အသေဆိုးပါစေ။ ဘုန်းကံကြီးသောယောက်ျား မပေါ်ပါစေနှင့် ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသော် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အသေဆိုးပါစေ။
မိန်းမကောင်းမထွန်းကားပါစေနှင့် ထွန်းကားပါကပြည့်တန်ဆာဖြစ်ပါစေ။ ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလည်း မရှိကြပါစေနှင့်ဟု ကျိန်စာဆိုသွားလေသည်။ ထို့ပြင်မိမိသည် လင်ကိုချစ်မြတ်နိုးရာ ဖြစ်လေရာဘဝတွင် လင်ယောက်ျားနှင့်သာ ပေါင်းသင်းရပါစေသားဟူ၍လည်း ဆုတောင်းသွားလေသည်။
ထိုသားသည်ဘီလူးမနှင့် လူသားညား၍ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သောကြောင့် ခွန်အားဗလကြီးမားကာ အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ခြေဖဝါးသည်တစ်တောင်ခန့်ရှိ၍ ယင်းကိုခြေရာတစ်တောင် မောင်မဲခေါင်ဟု ခေါ်တွင်လေသည်။ ဆင်ကိုပင်ဖမ်း၍ အစွယ်ကိုချိုးနိုင်သော ခွန်အားဗလစွမ်းရည် သတ္တိနှင့်လည်းပြည့်စုံလေသည်။
တစ်နေ့တွင်မယ်တော်ပြင်ပထွက်၍ အစာရှာနေခိုက် ဖခင်ကိုထမ်း၍ထွက်ပြေးလေသည်။ မယ်တော်ဘီလူးမကလည်းပြန်ရောက်၍ သိလျှင်သိချင်းလိုက်လေရာ သူပိုင်သောနယ်ပယ်ကို ကျော်သွားပြီဖြစ်သည့်အတွက် ဆက်လက်မလိုက်နိုင်တော့ပဲ သားနှင့်လင်အတွက် အပူမီးတောက်လောင်ကာ ရင်ကွဲနာကျပြီးသေဆုံးလေသည်။
ဘီလူးမဘဝမှသေဆုံးစဉ်ကို စိတ်စောနေ၍ လူ့ဘဝမအောင်ဖြူဖြစ်စဉ်က ကျန်ရစ်ခဲ့သောဖျာလိပ်ကို သတိရစွဲလမ်းချက်ဥပါဒါန်ကြောင့် ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူ ဖြစ်လာလေသည်။ ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူသည် လင်နှင့်သားကိုစိတ်နာသော ကြောင့်သူမကို တင်မြှောက်ပသသောအခါ ယောက်ျားများကိုင်တွယ် ပူဇော်ပသခြင်းမပြုရပေ။
မိန်းမများသာပူဇော်ပသရသည်။ ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူတင်မြှောက်ရာတွင် ကန်တော့ပွဲ၌ထည့်ရိုးထုံးစံဖြစ်အုန်း၊ ငှက်ပျောကိုထည့်ပြီး ပွဲရှေ့၌ဖျာလိပ်သစ်တွင် ထဘီ၊အင်္ကျီ၊ဆံစု၊ဘီးစသည်ဖြင့် လူကဲ့သို့ဝတ်ဆင်လျက် ကျောက်ပြင်၊သနပ်ခါးတုံး၊မှန်တို့ဖြင့် အဆင်သင့်ထားပေးရသည်။
အပျိုအရွယ်မိန်းမပျို ကလေးများဆုံမိကြသည့်အခါ မိမိရည်မှန်းထားသူနှင့် ပေါင်းသင်းရမှုမှန်ပါလျှင် မအောင်ဖြူသခင်မကြီးက ဘယ်နှစ်ချက်ရိုက်ပြတော်မူပါဟု အပျော်ပါးရယ်စရာ မေးမြန်းကြလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးလောကတွင် ထင်ရှားသောနတ်တစ်ပါးဖြစ်လေသည်။
မအောင်ဖြူနတ်ဝင်ပါက ဖျာလိပ်ဘယ်ညာယိမ်းပြသည်ဟု ယုံကြည်ကြလေသည်။ ကြို့ပင်ကောက်မြို့သို့ ကြုံတုန်းကြုံခိုက်ရောက်ရှိပါက သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာရသလောက် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါ။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
သုံးမိနဈ ရနှေေးအိုးတှေ ဝယျပွီး ခဏနဲ့ပကျြလို့ စိတျညဈနပွေီလား ဒီနညျးလေးအတိုငျး ပွငျကွညျ့ပါ လုံးဝ အဆငျပွသှေားစရေမယျ …
၃ မိနဈရနှေေးအိုးပကျြလို့ လှငျ့မပဈနဲ့ ဒီအတိုငျးပွငျပွီး သုံးလိုကျပါ
သုံးမိနဈ လြှပျစဈ ရနှေေးအိုးပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့ ခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ။
လူသုံးမြားနတေဲ့ဖျောပွပါ သုံးမိနဈ လြှပျစဈရနှေေးအိုးတှဟော လပိုငျးနဲ့ ပကျြစီး ပွီး စက်ကူ အဟောငျးရောငျးတဲ့ဆိုငျတှမှော
အခြိနျဈေးနဲ့ လာရောငျးထားတာအမြားကွီးတှေ.နရေလို့ ပွုပွငျ အသုံးခတြဲ့နညျးကို ရေးပွလိုကျပါတယျ။
အခုလို ပွုပွငျပွီး ကနြျောကိုယျတိုငျ လကျတှေ့ သုံးနတော ၂ နှဈနီးပါရှိနပွေီး ဖွဈတယျ ၊မူလ အသဈထကျ စိတျခစြှာ အသုံပွုနိုငျတဲ့နညျးပါ။
ရနှေေးအိုး အမြားစု ဟာ power supply. ချေါ လြှပျစဈ ကို အောကျဖကျ အဝိုငျးနရောက ကွှေးပါတယျ ၊ အဲ့ဒီနရော မှာတပျဆငျထားတဲ့ terminal ကွေးပွားလေးတှဟော အလှနျပါးပွီးအသုံးပွု တာ ကွာလာရငျ အပူဒဏျကွောငျ့ ပကျြစီးကာ ငုတျနှဈခုမထိတော့ဘဲ လြှပျစဈဓာတျမစီးနိုငျကာ ရနှေေး ကြိုမရ ဖွဈတဲ့ဘဝကို ရောကျရပါတယျ။
အဲသညျတော့ power supplyပေးတဲ့လမျးကွောငျးအသဈထှငျပွီး တပျပေးလိုကျရငျ အကောငျးဖွဈသှားပါတယျ။
(အိုးအမြားစုက အောကျဖကျမီးအဝငျနရောပကျြကွလို့ပါ)၊ ပိုပွီးသခြောခွငျရငျ AVO မီတာနဲ့ အောကျဖကျက အပူပေးကှိုငျကို ထောကျတိုငျးလို့ အခကျြပွရငျ ကှိုငျကောငျး တာပါဘဲ။
၁.ယိုးဒယားကလာတဲ့ ဟငျးကွျောအိုး အနီတှမှော သုံးတဲ့ အခံဆော့ကကျဂေါငျး (ကွှခေံဖွဈရပါမယျ)ကို လြှပျစဈဆိုငျတှမှော 500/- နဲ့ ဝယျပါ။
၂.ရနှေေးအိုးအောကျဖကျ screw သုံးလုံးဖွုတျပွီးဖှငျ့ပါ။ အလညျ အဝိုငျးသို့ power supply ပေးသညျ့ ဝါယာစနှဈစ တှရေ့ပါမညျ ။(အပွာနှငျ့ အနီ) ၊၎င်းငျးအစ နှဈခုအား ဘဲနှုတျသီး ပလာယာဖွငျ့ အသာဖွုတျပါ။
၃.ဝယျလာသညျ့ဆော့ကကျအထိုငျ မှ ကွှသေား ပါသညျ့အပိုငျးကို ယူပွီး ရနှေေးဘူး၏ အောကျခွတေဖကျခွမျး ဝါယာကွိုး အလှမျးမှီရာ နရောတှငျ နရောခပြါ။ (အခွားဘကျတှငျ အခကျြပွ မီး/pilot lamp) ရှိသညျ။
၄.အောကျခွေ အပေါကျဖောကျရာတှငျ ဖောကျစကျ မရှိပါက ဖျောပွထားသလို သံခြှနျ /စကဘော ကို မီးအပူပေးပွီး ရနှေေးဘူးအောကျခံ ကျောသားကို အပေါကျဖောကျ ယူပါ။
၅.ဆော့ကကျအထိုငျ ကွှခေေါငျး တပျဆငျနရောခရြာတှငျ လြှပျစဈဝငျမညျ့ငုတျ နှဈခု မထိအောငျ စနဈတကြ နတျကွပျပေးပါ။(တဖကျဖကျကို ရာဘာ ပိုကျသေး စှပျပေးလြှငျပိုပွီးစိတျခရြပါသညျ။
၆.၎င်းငျးနောကျ ပထမ ဖွုတျထားခဲ့သညျ့ ဝါယာ ၂ စကို အသဈထိုငျထားသညျ့ ကွှဆေော့ကကျတှငျ တပျဆငျပေးပွီး အောကျဘကျမှ screw သုံးလုံးကို စံနဈတကြ ပွနျတပျ ပေးလြှငျ ရနှေေးကွိုနိုငျသညျ့ အိုးအကောငျးတခု ရလာမညျဖွဈပါသညျ။
၇.အသုံးပွုမညျ့ မီးကွိုးမှာ ယိုးဒယား ဟငျးကွျောအိုး အနီ တှငျ အသုံပွုသညျ့ ကွိုးဖွဈပွီး အိမျတှငျရှိပါက ထပျမံဝယျယူရနျမလိုအပျပါ။ ဝယျလြှငျ1500/- ကပျြ ဝနျးကငျြပေးရပါသညျ။
အိုးအထိုငျအဟောငျးမှ ဝါယာမြားဖွုတျကာ အထိုငျကို ပွနျပွီး အသုံပွုနိုငျပါသညျ။ဆော့ကကျအထိုငျမှာ ကွှေ ဖွဈရပါမညျ ။
ရနှေေးအိုးမှာ ဝပျ watt-900 ခနျ့ဖွဈလို့ အထိုငျတှကေို့ စံနဈတကြ နတျကွပျ ရပါမညျ။ မထိတထိ ဖွဈပါက လြှပျစဈ spark မြားဖွဈကာ အန်တရာယျဖွဈနိုငျကွောငျးပါခမြာ။ရနှေေး အိုး က ဈေးပေါပါတယျ။4500/-ဘဲ ပေးရတာပါ။ ပွငျသုံးရငျ ၂ နှဈ လှညျ့မကွညျ့ရပါဘူးဗြာ။
၃ မိနစ်ရေနွေးအိုးပျက်လို့ လွှင့်မပစ်နဲ့ ဒီအတိုင်းပြင်ပြီး သုံးလိုက်ပါ
သုံးမိနစ် လျှပ်စစ် ရေနွေးအိုးပျက်ရင် ပစ်မထားနဲ့ ခုလိုပြင်သုံးရင် အများကြီးသုံးလို့ရတယ်။
လူသုံးများနေတဲ့ဖော်ပြပါ သုံးမိနစ် လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးတွေဟာ လပိုင်းနဲ့ ပျက်စီး ပြီး စက္ကူ အဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ
အချိန်ဈေးနဲ့ လာရောင်းထားတာအများကြီးတွေ.နေရလို့ ပြုပြင် အသုံးချတဲ့နည်းကို ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
အခုလို ပြုပြင်ပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ သုံးနေတာ ၂ နှစ်နီးပါရှိနေပြီး ဖြစ်တယ် ၊မူလ အသစ်ထက် စိတ်ချစွာ အသုံပြုနိုင်တဲ့နည်းပါ။
ရေနွေးအိုး အများစု ဟာ power supply. ခေါ် လျှပ်စစ် ကို အောက်ဖက် အဝိုင်းနေရာက ကြွေးပါတယ် ၊ အဲ့ဒီနေရာ မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ terminal ကြေးပြားလေးတွေဟာ အလွန်ပါးပြီးအသုံးပြု တာ ကြာလာရင် အပူဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးကာ ငုတ်နှစ်ခုမထိတော့ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်မစီးနိုင်ကာ ရေနွေး ကျိုမရ ဖြစ်တဲ့ဘဝကို ရောက်ရပါတယ်။
အဲသည်တော့ power supplyပေးတဲ့လမ်းကြောင်းအသစ်ထွင်ပြီး တပ်ပေးလိုက်ရင် အကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။
(အိုးအများစုက အောက်ဖက်မီးအဝင်နေရာပျက်ကြလို့ပါ)၊ ပိုပြီးသေချာခြင်ရင် AVO မီတာနဲ့ အောက်ဖက်က အပူပေးကွိုင်ကို ထောက်တိုင်းလို့ အချက်ပြရင် ကွိုင်ကောင်း တာပါဘဲ။
၁.ယိုးဒယားကလာတဲ့ ဟင်းကြော်အိုး အနီတွေမှာ သုံးတဲ့ အခံဆော့ကက်ဂေါင်း (ကြွေခံဖြစ်ရပါမယ်)ကို လျှပ်စစ်ဆိုင်တွေမှာ 500/- နဲ့ ဝယ်ပါ။
၂.ရေနွေးအိုးအောက်ဖက် screw သုံးလုံးဖြုတ်ပြီးဖွင့်ပါ။ အလည် အဝိုင်းသို့ power supply ပေးသည့် ဝါယာစနှစ်စ တွေ့ရပါမည် ။(အပြာနှင့် အနီ) ၊၎င်းအစ နှစ်ခုအား ဘဲနှုတ်သီး ပလာယာဖြင့် အသာဖြုတ်ပါ။
၃.ဝယ်လာသည့်ဆော့ကက်အထိုင် မှ ကြွေသား ပါသည့်အပိုင်းကို ယူပြီး ရေနွေးဘူး၏ အောက်ခြေတဖက်ခြမ်း ဝါယာကြိုး အလှမ်းမှီရာ နေရာတွင် နေရာချပါ။ (အခြားဘက်တွင် အချက်ပြ မီး/pilot lamp) ရှိသည်။
၄.အောက်ခြေ အပေါက်ဖောက်ရာတွင် ဖောက်စက် မရှိပါက ဖော်ပြထားသလို သံချွန် /စကေဘာ ကို မီးအပူပေးပြီး ရေနွေးဘူးအောက်ခံ ကော်သားကို အပေါက်ဖောက် ယူပါ။
၅.ဆော့ကက်အထိုင် ကြွေခေါင်း တပ်ဆင်နေရာချရာတွင် လျှပ်စစ်ဝင်မည့်ငုတ် နှစ်ခု မထိအောင် စနစ်တကျ နတ်ကြပ်ပေးပါ။(တဖက်ဖက်ကို ရာဘာ ပိုက်သေး စွပ်ပေးလျှင်ပိုပြီးစိတ်ချရပါသည်။
၆.၎င်းနောက် ပထမ ဖြုတ်ထားခဲ့သည့် ဝါယာ ၂ စကို အသစ်ထိုင်ထားသည့် ကြွေဆော့ကက်တွင် တပ်ဆင်ပေးပြီး အောက်ဘက်မှ screw သုံးလုံးကို စံနစ်တကျ ပြန်တပ် ပေးလျှင် ရေနွေးကြိုနိုင်သည့် အိုးအကောင်းတခု ရလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇.အသုံးပြုမည့် မီးကြိုးမှာ ယိုးဒယား ဟင်းကြော်အိုး အနီ တွင် အသုံပြုသည့် ကြိုးဖြစ်ပြီး အိမ်တွင်ရှိပါက ထပ်မံဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ ဝယ်လျှင်1500/- ကျပ် ဝန်းကျင်ပေးရပါသည်။
အိုးအထိုင်အဟောင်းမှ ဝါယာများဖြုတ်ကာ အထိုင်ကို ပြန်ပြီး အသုံပြုနိုင်ပါသည်။ဆော့ကက်အထိုင်မှာ ကြွေ ဖြစ်ရပါမည် ။
ရေနွေးအိုးမှာ ဝပ် watt-900 ခန့်ဖြစ်လို့ အထိုင်တွေကို့ စံနစ်တကျ နတ်ကြပ် ရပါမည်။ မထိတထိ ဖြစ်ပါက လျှပ်စစ် spark များဖြစ်ကာ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါခမျာ။ရေနွေး အိုး က ဈေးပေါပါတယ်။4500/-ဘဲ ပေးရတာပါ။ ပြင်သုံ
သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက်သွားဆရာဝန်တွေကသွားတိုက်တံကို ၃ လကိုတစ်ကြိမ်လဲလှယ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ၃ လထက်ပိုပြီး ကြာအောင် သုံးစွဲတဲ့အခါသွားတိုက်တံမှာဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ၊ရောဂါပိုးတွေကပ်ညိနိုင်ခြေအများအပြားရှိနေလို့ ၃ လ ထက် ပိုကြာအောင်မသုံးသင့်ပါဘူး။
“ထမငျးပူကို မစားပါနဲ့” “ကွှသေီးကိုသာ စားပါ” “ရောကျရာဒသေ ခွရောခခြဲ့ပါ” စကားပုံ၏ အဓိပ်ပါယျ
ထမငျးပူဆိုတာ သူတဈပါး မကျြရညျပေါကျကွီးငယျကမြှ စားရတဲ့ထမငျးကို ချေါတာပါ။ ဘယျတော့မှ မစားမိပါစနေဲ့။
အခုအခြိနျ စားကောငျးခငျြကောငျးမယျ၊ သံသရာမှာ အလှနျပူလောငျတတျတယျ။
ထမငျးအေးဆိုတာကတော့ မငျးကို ခဈြလို့ ခငျလို့ တနျဖိုးထားလို့ ကွညျညိုလို့ ကြှေးလာတဲ့ ထမငျးပဲ ။ ငါးပိရညျနဲ့ပဲ စားရ စားရ သံသရာမှာ အေးမွပါတယျ။ စားတတျအောငျ ကွိုးစားပါနျော။
(၂) အသီးကို စားမယျဆိုရငျ ကွှသေီးကိုပဲ စားပါ။ ဘယျတော့မှ ခူးမစားပါနဲ့။
ကွှသေီးစားပါ ဆိုတာ မငျးကို ခဈြလို့ ခငျလို့ ကွညျညိုလို့ ကြှေးလာတဲ့အသီးကို စားပါလို့ဆိုလိုတာပါ။
ဒါပမေယျ့ ကွှသေီးတိုငျးလညျး မစားရဘူး ။ ကွှသေီးပမေယျ့ မစငျပုံပျေါကရြငျ မငျးမစားတော့ဘူး မဟုတျလား။ ဒီလိုပဲ ကွှသေီးတော့ ကွှသေီး။
မငျးကို ခဈြလို့ ခငျလို့ ကှညညြိုလို့ လာပေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျကှယျမှာ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ရလိုမှုတှေ ပါနရေငျ မစားရဘူး။ မစားကောငျးပါဘူး။
ခူးမစားပါနဲ့ဆိုတာ မငျက ကူညီိစရာရှိရငြ ကူညီ၊ လုပျစရာရှိရငျ လုပျပေးလိုကျပါ။ အဲဒါကို ကူညီခ၊ လုပျပေးခ တောငျးနရေငျ ခူးစားတာပဲ။
သူတဈပါးကို ကူညီပါ။ သူတို့ဆီက ကြေးဇူးတငျစကားတဈခှနျးတောငျ မမြှျောလငျ့ပါနဲ့။ မွှောလြငြ့ပှီိး ကူညီတာ ခူးစားတာပဲ။ မငျး ဘယျတော့မှ ခူးမစားပါလနေဲ့။
(၃)တတိယစကားကတော့ – ခြိုးငှကျလေးတှေ ခါငှကျလေးတှဟော မွမှောနားပွီး ပွနျသှားရငျ ခွရောထားခဲ့တယျ ။
ဒီလိုပါပဲ၊ မငျးလညျး ဘယျနရော ဘယျဒသေ ရောကျရောကျ မငျး ပွနျရငျ မငျး ခွရောကနျြခဲ့ပါစေ။
ဒီလိုပါပဲ လူ့လောကကွီးကို တို့တတှလောခဲ့ကွ၊ တို့ပွနျရငျ တို့ခွရောတှေ ကနျြမှ ဖွဈမယျ။
Credit – (ဘဝဂုဏျရညျ)အရှငျကုသလ USA
(၁) ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ထမင်းပူကို မစားပါနဲ့။ ထမင်းအေးကိုပဲ စားပါ ။
ထမင်းပူဆိုတာ သူတစ်ပါး မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျမှ စားရတဲ့ထမင်းကို ခေါ်တာပါ။ ဘယ်တော့မှ မစားမိပါစေနဲ့။
အခုအချိန် စားကောင်းချင်ကောင်းမယ်၊ သံသရာမှာ အလွန်ပူလောင်တတ်တယ်။
ထမင်းအေးဆိုတာကတော့ မင်းကို ချစ်လို့ ခင်လို့ တန်ဖိုးထားလို့ ကြည်ညိုလို့ ကျွေးလာတဲ့ ထမင်းပဲ ။ ငါးပိရည်နဲ့ပဲ စားရ စားရ သံသရာမှာ အေးမြပါတယ်။ စားတတ်အောင် ကြိုးစားပါနော်။
(၂) အသီးကို စားမယ်ဆိုရင် ကြွေသီးကိုပဲ စားပါ။ ဘယ်တော့မှ ခူးမစားပါနဲ့။
ကြွေသီးစားပါ ဆိုတာ မင်းကို ချစ်လို့ ခင်လို့ ကြည်ညိုလို့ ကျွေးလာတဲ့အသီးကို စားပါလို့ဆိုလိုတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကြွေသီးတိုင်းလည်း မစားရဘူး ။ ကြွေသီးပေမယ့် မစင်ပုံပေါ်ကျရင် မင်းမစားတော့ဘူး မဟုတ်လား။ ဒီလိုပဲ ကြွေသီးတော့ ကြွေသီး။
မင်းကို ချစ်လို့ ခင်လို့ ကွညျညျိုလို့ လာပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရလိုမှုတွေ ပါနေရင် မစားရဘူး။ မစားကောင်းပါဘူး။
ခူးမစားပါနဲ့ဆိုတာ မင်က ကူညီိစရာရှိရငျ ကူညီ၊ လုပ်စရာရှိရင် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒါကို ကူညီခ၊ လုပ်ပေးခ တောင်းနေရင် ခူးစားတာပဲ။
သူတစ်ပါးကို ကူညီပါ။ သူတို့ဆီက ကျေးဇူးတင်စကားတစ်ခွန်းတောင် မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ မြှျောလငျ့ပွီိး ကူညီတာ ခူးစားတာပဲ။ မင်း ဘယ်တော့မှ ခူးမစားပါလေနဲ့။
(၃)တတိယစကားကတော့ – ချိုးငှက်လေးတွေ ခါငှက်လေးတွေဟာ မြေမှာနားပြီး ပြန်သွားရင် ခြေရာထားခဲ့တယ် ။
ဒီလိုပါပဲ၊ မင်းလည်း ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ ရောက်ရောက် မင်း ပြန်ရင် မင်း ခြေရာကျန်ခဲ့ပါစေ။
ဒီလိုပါပဲ လူ့လောကကြီးကို တို့တတွေလာခဲ့ကြ၊ တို့ပြန်ရင် တို့ခြေရာတွေ ကျန်မှ ဖြစ်မယ်။
Credit – (ဘဝဂုဏ်ရည်)အရှင်ကုသလ USA